အထူးနှုန်းများတဲ့ကုဒ် - ဖဲချပ်ကူညီ-ဖဲချပ်အကြံပေးချက်များအက္ပ္ကို
ဘာလိုဖဲချပ်ကစားရန်? ဖဲ ကုန္သြယ္သ
သင်ကြိုက်လျှင်သင်ဖဲချပ်ကစားရန်တစ်ခါတစ်ရံလိုသုံးဖြုန်းဖို့နာရီအနည်းငယ်ကစား၊ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်၊သင်ဝယ်ယူလိုအပ်ထုတ်ကုန်များ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်စားပွဲ၊အဖဲထည်များ၏အစုချစ်ပ်နှင့်ကတ်များအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်မား။ မကြာခဏ၊အဖဲချပ်ဇယားသည္အတွက်တိုင်းပြည်အိမ်ကြီးများရှိအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ဤ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အထပ္ခိုးပါ၊သင်စုစည်းနိုင်အပြည့်အဝ-စုံဂိမ်းအခန်း၊နေရာအပြင်အဖဲချပ်ဇယား၊ရှိလိမ့်မည်ဘိလိယက်၊စားပွဲတင်တင်းနစ်၊စားပွဲတင်တင်းနစ်နှင့်အခြားဖျော်ဖြေရေး။ အချို့လူများကအိပ်မက်မက်ခဲ့ကြကြောင်းဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအတွက်ကြာမြင့်စွာအချိန်နှင့်ယခုအချိန်လှည့်ရန်ဤအိပ်မက်တွေကိုအဖြစ်မှန်သို့။ ထို့အပြင်၊ထိုသို့သတိပြုသင့်သောဖဲချပ်ဂိမ်းအတွက်အရာသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပြိုင်ဘက်၊ဒါကြောင့်ချက်ချင်းရှာတွေ့အနည်းငယ်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်းဖို့အဆက်မပြတ်နှင့်အတူဆော့ကစား။ သင်ပင်စုစည်းပြိုင်ပွဲနှင့်အတူသင်္ကေတနည်း။ ဖဲချပ်ကိုလည်းလူကြိုက်အများဆုံးလောင်းကစားဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်။ ဒါဟာကစားအတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၊နှင့်အဓိကပြိုင်ပွဲတို့တွင်ပညာရှင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်လူသန်းပေါင်းများစွာ၏။ ယခုအွန်လိုင်းဖဲချပ်သည်လူကြိုက်များ၊ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမကြိုက်ဤအမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုံမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အထိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌၊မမြင်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်နှင့်အကိုင်အတွက်သင်၏လက်ကိုမကတ်များ၊ဒါပေမယ့်သာမန်ကွန်ပျူတာမောက်စ်။ ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းအဘယ်သူမျှမစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ပင်ပို။ နာက္တစ္ခုကမှာဆင်းထိုင်ဖို့အဖဲစားပွဲသို့ကြည့်ရှု၊မျက်စိသည်သင်၏ပြိုင်ဖက်၏၊ခံစားသောထူးခြားတဲ့လေထုနှင့်ပျော်မွေ့တဲ့အံ့သြဖွယ်။ သင်လိုအပ်သမျှကိုအဘို့ ဖဲကစားသမားမှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်တော်လေးစျေးနှုန်းသက်သာဈေးနှုန်းများ၊ဒါကြောင့်အလွန်ထူးဆန်းမ၏အားသာချက်ယူ။ ရှိပါတယ်ထူးပြုစတိုးဆိုင်များပူဇော်သောဖဲချပ်ထုတ်ကုန်ကနေအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်သာ၊အထည်၊အစုံချစ်ပ်များ၏ကဒ်များ၊ဒါပေမယ့်လည်းဖဲချပ်စာအုပ်များ၊ခွက်၊အမှုပေါင်း၊မီးခွက်ကိုများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ဒါဟာအကြံပြုသည်သွားရောက်ရန်အဖဲချပ်စတိုးဆိုင်အခုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကဲဖြတ်ရန်၎င်း၏အကွာအဝေး။ ကျင့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဤသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပေါ်ကျယ်ပြန့်သောဝဘ်အဖြစ်အွန်လိုင်းစတိုးများသောအားဖြင့်ပူဇော်ႀကီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးထုတ်ကုန်များ၏၊အဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အမိန့်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏မည်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာ။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျမဝယ်နိုင်အရာအားလုံးကိုအဘို့အလိုအဖဲချပ်၊အောင်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းအခန်း၊သို့မဟုတ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သေးငယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲ။ ထိုအဆုံးသတ်ပန်းတိုင်သည်အလွန်အရေးကြီးမဟုတ်၊အရေးအပါဆုံးအရာသင်သိရန်အဘယ်အဝယ်နှင့်အဘယ်မှာဝယ်ရန်။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးတွင်၊ဖဲရှည်လျားပြီးပြောင်းလဲမှ သာမန်ကဒ်ဂိမ်းအတွက်စီးပွားတွေကိုဆွဲဆောင်သန်းပေါင်းများစွာကမ္ဘာအဝှမ်းကစားသမားတွေ၊သောဤလူအဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်မြှုပ်နှံဟာသူတို့ရဲ့တစျခုလုံးကိုဘဝတွေကို။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်လည်းတုံ့ပြန်မှုကိုအောက်မေ့ထိုက်သောကမ္ဘာ့စီးရီးဖဲပြိုင်ပွဲ၊ရပ်ဘီကစား၊နှင့်နှစ်တိုင်းအကံကောင်းမြားထားခဲ့သည္။ပြောင်းလဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတစျခုလုံးစာသားအတိုင်းသာတစ်ညနေ။ ဒီတော့ဒီကဒ်ဂိမ်းကြိုက်။ ကားအဘယ်နှစ်၏ဖဲချပ်ကစားခြင်း? သို့သော်၊လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ရဲ့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်သင်သိထားရန်လိုအပ်ပြီးအလုပ်အများသောသူအနိုင်ရလိုလားတသမတ်တည်းဒီကဒ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်? အားလုံးပြီးနောက်၊အနှစ်သာရအဖဲချပ်ကစားခြင်းသည်သာကောင်းတစ်ခုရရန်ပေါင်းစပ်၊ကစားသမားနှင့်အတူအဆိုးဆုံးကတ်များအနိုင်ရရှိ၊ဒါပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲသူအလုပ်အတိုက်အခံအတွက်ယုံကြည်သူတို့ ။ စကားမစပ်၊ဤအခြားအဓိကအကြားခြားနားချက်ဖဲချပ်နှင့်အခြားကဒ်ဂိမ်းများ။ အားလုံးပြီးနောက်၊ဒီမှာကျနော်တို့အနိုင်ရနိုင်နှင့်အတူနီးပါးမည်သည့်ကဒ်၊ရုံဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ကောင်းတစ်ဦးပုံရိပ်ကိုကိုယ်ကိုကိုယ်များအတွက်စားပွဲ၌။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊မ အကြောင်းမေ့လျော့၏အယူအဆ ။ အားလုံးပြီးနောက်၊၏သင်တန်းတွင်ကုန်သွယ်၊ကျနော်တို့မြှင့်တင်နိုင်တာအတွက်လောင်းကြေးရှိသမျှဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်း၊ကျနော်တို့ရှိသည်သောအားကြီးသောနဲ့အနိုင်ရကတ်များအတွက်ငါတို့လက်၊နှင့်အဆုံး၌အားလုံးအတိုက်အခံနိုင်ဤပစ်သူတို့၏အနီးသို့အသွား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖဲချပ်ဟုခေါ်သည်လိမ်လည်ဂိမ်းအတွက်၎င်း၏အစောပိုင်းရက်၊ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်မဟုတ်။ အများစုကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနေ့အကြောင်းထောက်ပြဖြစ်ပါသည်၊တကယ်တော့၊အတိအကျမိတ္တူကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ နိုင်ရန်အတွက်အောင်မြင်မှုရရန်ဂိမ်းအတွက်၊သင်လိုအပ်အထားတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းထား။ ကိုယ့်ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌တူ၊အတွက်ဖဲချပ်ကျနော်တို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်လူများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်နိုင်မှာသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့စေဖို့သူတို့ကိုအဘယ်သို့ပြုချင်။ အဘယ်ကြောင့်ဤဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်များစွာလူသိရှင်လာကောင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားပါ။ ထို့ကြောင့်၊နဲ့မတူဘဲအားလုံးအခြားလောင်းကစားဂိမ်းများ၊ဖဲချပ်သည်စိတ်ဝင်စားစရာ၊လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစားမဆန့်ကျင်တစ်ဦးနိုသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းသည်၊သို့သော်ဆန့်ကျင်အတူတူကစားသမားအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ညီ၊ငါတို့သည် ကျနော်တို့မဖြစ်မနေအဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်၊ပိုပြီးယုတ္တိကျွန်တော်တို့အတွက်ခန့်မှန်းရခက်နှင့်အဘို့အကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အဖြစ်။ သာထို့နောက်ကျနော်တို့လိမ့်မည်နိုင်ပါရန်အမြဲအနိုင်ရငွေပေးအပ်ခြင်း၊မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦး။ သို့သော်၊ဖဲချပ်မသည်ဝင်ငွေအရင်းအလုံးကစားသမားများအတွက်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကအမျိုးအစားများကစားသမားသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာအွန်လိုင်းဇယားသည်။ အံ့သြစရာ၊များစွာသောကစားသမားတွေရိပ်ဖဲသီးသန့်အဖြစ်အပန်းဖြေ။ ထိုသူတို့အဘို့၊အနှစ်သာရအဖဲချပ်ကစားခြင်းသည်အနားယူရန်ပြီးနောက်ခက်ခဲနေ့ရဲ့အလုပ်အားဖြင့်ကစားနည်းငယ်ကိုအွန်လိုင်း။ တချိန်တည်းမှာ၊ထိုကဲ့သို့သောလူအမပင်သည်အလွန်စိတ်ဆိုးကြောင်းသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတည်းကသူတို့ဟာကစားအပေါ်အဓိကအားဖြင့်မိုက်ခရို-ကန့်သတ်ထားသို့မဟုတ်ပင်အပေါ်ကို။ သင်တန်း၏၊ဒီအမြင်အာရုံစေသည်၊ဖဲချပ်များအပြားကစားသမားတွေဟာအဓိကလွှတ်ပေးရန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု၊ခွင့်ပြုသောသင်အနားယူသင်တို့၏ဝိညာဉ်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့နိုင်ရန်အတွက်။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြသောဖဲချပ်ကစားခြင်းအကြောင်းတရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုပြီးအထူးကြပ်မတ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ။ ။ ထို့ကြောင့်၊အဆိုပါအချက်ဂိမ်း၏အစအကြောင်းအမျိုး၏သင်တန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ယင်းအစားသာယာသောသင်တန်းမှာအကြောင်း။ သို့သော်၊ဤအမျိုးအစားနိုင်သည်သာဖြစ်မှတ်ယူအပြုသဘောဆိုရင်သူတို့ကစားသီးသန့်မှာကန့်သတ်မှာသူတို့လုပ်ဖို့မတတ်နိုင်နိုင်အောင်။ ပါကကစားသမားအရှုံးကြီးပိုပြီးသူ့ထက်ပင်ရရှိ၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤဂိမ်းအသပန်းဖြေ။ ၏သင်တန်း၊သင်တွေ့လိမ့်မည်၊ကလူအများကြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာမည်သူယုံကြည်လက်ခံကြောင်းသင်၏အဓိပ္ပါယ်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်သူတို့ကိုအဆက်မပြတ်သောငွေကိုသူတို့အလွတ်ရဖို့ကိုအင်တာနက်ကနေ။ သို့သော်တကယ်တော့၊သာ ၅ ကစားသမားတွေဝင်ငွေဝင်ငွေမှသူတို့ရဲ့ဂိမ်းအစဉ်၊အားလုံးအရာကြွင်းလေဖြစ်စေများမှာမူသုညသို့မဟုတ်အနှုတ်သောသူကစားသမားတွေတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးသူတို့မှာပိုက်ဆံအများကျောက်ပြားကို။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အခုထိဖြစ်လာမှဖြစ်နိုင်တစ်ဦးအပြုသဘောကစားသမား၊အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများရှိပြီးသားသက်သေအားဖြင့်ဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥပမာ။ သို့သော်၊သငျသညျဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစတင်ရန်အဘယ်မှာရှိသင်လေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အပေါငျးတို့သစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပထမဦးဆုံး၊ထိုအခါဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအားကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်။ ထိုအခါထံမှသင်ယူသင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအားကစားတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်။ ညီ၊သင်သည်လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သုံးစွဲဖို့အပိုဆောင်းအစီအစဉ်အဖြစ်ကျင်းပ မန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဖဲဖုန်းများကတည်းက၊အဘယ်သူမျှမပုံမှန်စားသမားကစားသူတို့မရှိဘဲ။ သင်အံ့သြသွားလိမ့်မည်၊သို့သော်အချို့အလွန်ကြွယ်ဝသောလူများ၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်သုံးစွဲဖို့ဒီဂိမ်းကိုယ်ကိုနာမည်ကြီးအောင်၊ပင်ကနေပိုပြီးငွေရှာ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖဲပြိုင်ပွဲအာရုံကိုဆွဲဆောင်များအပြားကြည့်ရှုတော်မူသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုအပေါ်။ ညီ၊ကစားသမားစီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးအနိုင်ရဖို့နောက်ထပ်အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့၊အရာရေးသားပြောဆိုအတွက်အားလုံးသတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများ။ နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊အဲဒါ့အထူးဇာတ်ဖဲချပ်ကိုကြယ်ကြသူအချိန်ကြာမြင့်စွာအမည်တစ်ခုလုပ်ဘို့မိမိတို့အနိုင်ရခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ သငျသညျအမည်ကိုလို့ရပါတယ်အနည်းဆုံးဒံ နှင့်ဖီးလ် ကျွန်တော်သေချာသင်ကြားရကြပြီအဲဒီနာမည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်၏အသက်တာ၌
လူသန်းပေါင်းများစွာဖဲချပ်ကစား၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်"စာရွက်"အောင်မြင်ဖို့အတွက်။ ဤသည်အံ့သြစရာမဟုတ်သောကြောင့်၊ကျနော်တို့အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်း။ နစ်ခ် ယုံကြည်သောဥာဏ်ကိုနည်းပရိယာယ်နှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်ဂိမ်း၏အစမျှသာဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်လည်းလိုအပ်နိုင်မှအာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားအဖြစ်များစွာသောအကြောင်းရင်းများအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ရာနဲ့ချီရှိပါတယ်ကောင်းသောဖဲချပ်စာအုပ်အကြောင်းပြောပြဖို့ဘယ်လိုသင်ပိုက်ဆံအနိုင်ရ။ နောက်တစ်ချို့အချိန်၊ကြိုးစားသူကိုလူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်များအတွက်မိမိတို့ကအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့၊ကံမကောင်းသဖြင့်၊အများအပြားရှိပါတယ်"ထင်"။ အဓိကပြဿနာဖြစ်ရန်စွမ်းနိုင်ခြင်း သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို။ ကောင်းစွာ၊သူတို့အားဖန်ဆင်းသော၊ကစားမှာမြင့်မားသောလောင်းကြေးစားပွဲ။ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဤအမှု၌ဖြစ်နိုင်၏ရာပေါင်းများစွာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်နှစ်လောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။ သို့သော်များစွာသောအကြားခြားနားချက်–တစ်ဦးအစပြု၏–နှင့်ထိုသူတို့-တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး-အဆုံး။ အများဆုံးအလေးအနက်အရာကပိုင်းခြားသင်၏သဘောထားကရန်၊သင့်ရဲ့နားလည်မှုကို၎င်း၏အနှစ်။ သောသူတို့အပြောအရာအားလုံးအတွက်တူညီသောဖဲချပ်အဖြစ်အသက်တာ၌အသိနီးပါးဘာမှမနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးအမှုအမှားအတွက်ဖဲချပ်။ နှင့်အတူစတင်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်သိဘယ်တော့မှသောကဒ်ပြားပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စားပွဲဘေးနှင့်အတူအဆုံးသတ်မည်မျှရက်သို့မဟုတ်တောင်မှပတ်ကိုမကံ။ အသက်တာ၌၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွက်အကြောင်းတရားများကျရှုံး၊ခ်စ္သည္နဲ့သူတို့ကိုရှာတွေ့။ ဒါပေမယ့်ဖဲချပ်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်။။။ကိုနားလည်ရန်အကြားခြားနားချက်နှင့်အရာကြွင်းလေအသက်တာ၏၊သငျသညျယူရန်လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်အကွာအဝေးအနေဖြင့်ဂိမ်း၊ကနေကြည့်နေတယ်။ ထိုအခါသင်ရလိမ့်မည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှု၏အနှစ်ဖဲချပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်လာမယ့်အဘယ်သို့ပြုရမည်။ ဖယ်ရှားပစ်ရက"အပို"အကြံအစည်၊အသင္းပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖဲကစားသမားမဟုတ်၊ကိုယ့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိုသူဖဲချပ်ကစားရန်။ ငါလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဒီဂိမ်းငါ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဝင်ငွေ။ သဘောပေါက်ဖို့အဆုံးမရှိကြောင်း"ပျော်ရွှင်"သို့မဟုတ်"အပျော်"။ ဟုတ်ကဲ့၊အဆင်ပြေသူများမှအ အမြင်၊ဒါပေမယ့်အဓိကမဟုတ်ပါင့်။ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ကြောင်း၊မည်သည့်အကြံအစည်နှင့်အတူ"အရသာ"အသည်းအနိမိတ်လက္ခဏာ၏ကစားသမားရဲ့ကျက်။ ကြောင်းသေချာပါစေသာ၊နောက်ဆုံးသောအရာလူတွေကစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်အချို့သောအမျိုးအမျှတိုက်ပွဲဝင်နည်းစနစ်။ လူတိုင်းမှာထိုင်ဖဲပြဲကိုပိုက်ဆံအနိုင်ရမှအသီးအသီးအခြား။ အနှေးနဲ့အမြန်ပိုပြီးရှင်းလင်းစွာသင်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်၊ပိုမိုမြန်ဆန်နှင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါလိမ့်မည်လုပ်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအရာတို့ကို။ အဓိကအရာတစုံတခုသည်အာရုံစိုက်ဖို့အားလုံးသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်သူတို့၏ဂိမ်းအကြောင်းသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကနားလည်ဖို့။ အားလုံးပြီးနောက်၊နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း၊အတွေ့အကြုံအရအကြံပြုပြောင်းပြန်ဆိုရင်တစ်ခုခုလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ဒါဟာအမှားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲသည်ပပျောက်ရေးမှဤစိတ်ကူး–သင်အလေးအနက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု။ သို့သော်လျှင်ဤသည်မဖြစ်၊ထိုအခါချဉ်းကပ်မှုအတွက်ဖဲချပ်ပတ်ဝန်းကျင် သင်လုပ်နိုင်သည်လုံခြုံစိတ်ချစွာမတ္ဆံုးျတူကေျပာပါတယ္။ ဥပမာအားဖြင့်၊အားလုံးကျန်ရှိနေသောအဘို့အကစားသမားစွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်ကစားရန်တူညီသောကဒ်ကွဲပြားခြားနားမျိုးမျိုးဆန့်ကျင်တိုက်အခံ။ သင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်သင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌လာသည်ကား။ သို့သော်အချို့ဖဲကစားသမားစတင်ကြည့်ဖို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်အတွက်ကျရှုံးအတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်။ သူတို့တစ်ခုခုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကြိုးစားနေ၊ကစား နှင့် ၊ဖြစ်နိုင်အံ့သြဖို့၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်။ ဒါဟာခက်ခဲပြီးသူတို့အဘို့အလက်ခံအပြီးသတ်ရလဒ်နေ့အဘို့သို့မဟုတ်တောင်မှပိုပြီးတော့တစ်ပါတ်အဘို့အအနုတ်လက္ခဏာ။ ဒါပေမယ့်အားလုံးသောနားလည်မှုကိုရကျိုးနပ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အကြောင်းအခိုးရောင်ရရှိခဲ့၏ကံဆိုးပြီတက်လာ။ လိုအပ်သောကတ်များကိုမမီွ၊ေက်ာ္ျမထည့်ရပါဘူး၊ပြီးပြိုင်ဘက်အများကြီးပိုပြီးကံကောင်းခြင်းနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏ။။။သင်ရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်တဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုမဖြစ်ဖို့အာရုံစူးစိုက်အပေါ်ရေတိုရေရှည်ရလဒ်များ–အဘို့အစောင့်ဆိုင်းပိုပြီးတိကျမှန်ကန်ဒေတာများအတွက်တစ်ရှည်လျားသောကာလ။ ထို့အပြင်၊အလွန်မကြာခဏနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦး၏အဆင့်အသိပညာများ၏မဟာဗျူဟာနှင့်နားလည်မှုဂိမ်းထဲမှာ၊သင်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်။ တာထဲကကံ၊အားလုံးရဲ့! ဒါကကိုဆိုလိုတယ်သင်ကရန်မလိုအပ်ပါဘာမှပြောင်းလဲ။ သင်အရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာဖြစ် သင်သည်လည်းအဘို့အရုံစောင့်ဆိုင်းအဖြူရောင်ဘား။ ပင်သောအခါအဆုတ်ယုတ်လာပြီးတစ်ခြား၊သင်ရပ်တန့်မရနိုင်ဘူး၊ကစား၏လက်ကို"ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်"။ အ ၏ထိုကဲ့သို့သောအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရုပ်ပြခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာမှစစ်မှန်သောအသက်တာ။ စို့တစ်ဦးကမိန်းကလေးထွက်မေးမြန်းနေ့စွဲအပေါ်၊ဒါပေမယ့်သူမကငြင်းဆန်။ ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့တခုခုမှားကြ၏ပဲ့ကိုသာအပြီးသတ်ရလဒ်ပါ၊ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချကြောင်းဖိတ်ခေါ်မိန်းကလေးများနေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်လှည့်ထွက်မနေသင့်ဘူးဒီမှာအားလုံးကြောင့်၊သင်ဆဲရရန်ငြင်းပယ်။ အောက်ခြေလိုင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ညံ့ဖျင်းကစားလက်သင့်စားပိုတက်လာမယ့်အချိန်။ ဒါပေမယ့်သင်မငြင်းမပယ်နိုင်မည်သည့်ဧည့်ခံပဲခဲ့ကြသောကြောင့်၊သင်သည်ကံမကောင်းအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ။ အာရုံစူးစိုက်မှုအလွန်အရေးကြီးပါသည်၊အထူးသဖြင့်မှကြွလာသောအခါ။ အတွက်၊ဒီအတိုင်းအတာအတွက်လောင်းအရွယ်အစားနဲ့တစ်လမ်းအတွက်ချက်ရန်နောက်ဆုံးအကျိုးရလဒ်အဘို့အခြို့သောကာလအတွင်း။ ဒါပေမယ့်အပြင်ထိုကဲ့သို့သောသိသာတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊မလွှဲနှင့် နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်:ရုံမှအမှန်တန်ဖိုးများ။ ကျနော်တို့ပြောနေတာနေကြတယ်၊သင်တန်း၏၊အကြောင်းပစ္စည်းအကျိုးကျေးဇူးများ။ ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့်လက်မကိုတိုင်း၏အတိုင်းသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဖဲချပ်တစ်ခုတည်းကိုသာအားဖြင့်ပိုက်ဆံပမာဏကိုသင်အနိုင်ရ။ လျှို့ဝှက်မင့်အများအပြားများစုမဟုတ်ဘူးလူအလာဖဲချပ်များအတွက်ကြီးမားတဲ့အနိုင်ရ။ ဟုတ်ကဲ့၊သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောလူတို့အဘို့၊ဒါပေမယ့်နက်အဓိပ္ပာယ်တူညီဖြစ်နေဆဲအာင္ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေး။ ဒါပေမယ့်အရမ်းကြာပြီးနောက်ထိုအတိုင်းအောင်မြင်မှု၏အကြွင်းအကျန်သောအားဖြင့်ပမာဏ၏ တိုးပွားလာခဲ့သည်ယနေ့အချိန်တွင်၊သင်နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်အ ၏ဤချဉ်းကပ်မှု။ အာရုံစူးစိုက်အပေါ်ပိုက်ဆံယ့မှသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒေနီးပါးတစ်သက်သေအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ပြောသူ:ဒီတော့အဘို့အလိုငှါအဘယ်သို့ဖဲချပ်ကစားရန်?! ဟုတ်ကဲ့၊အတွက်တိုးမြှင့်အမြတ်အစွန်း။ဒါပေမယ့်လက်မခံထားရန်၎င်း၏အရွယ်အစားမှာအရှေ့။သင်ရုံစဉ်းစားပိုက်ဆံအပေါင်းတို့သည်အချိန်! သင်သည်သင့်ဂိမ်းခံစား၊အသစ်မဟာဗျူဟာနှင့်နည်းဗျူဟာနည်းပညာတွေကိုတိုးတက်စေ၊နှင့်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစား။ ဖွင့်သည့်အခါအချို့သောအချိန်ပြီးနောက် အနိုင်ရရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်၊နှင့်အ ပါလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးဖို့စတင်! ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲငွေရှာနိုင်ဘူးလျင်မြန်စွာမြင့်တက်။ တစ်ခုသာလူအနည်းငယ်ကစီမံခန့်ခွဲဖို့ကြီးမားတဲ့ ၊နှင့်အတူစတင် နှင့်အခမဲ့လက္မွတ္မ်ားပေးဆောင်ပြိုင်ပွဲ။ အကျန်ရန်လိုအပ်သည်အလုပ်ကြိုးစားအောင်မြင်ရန်တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်အဖဲချပ်။ အလွန်အကျွံအာရုံစူးစိုက်အပေါ်ဘဏ္ဍာရေးဘက်ဖဲချပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကစားအဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်။ ထင်တဲ့သူတွေပိုမကြာခဏတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးသူတို့ရဲ့ဂိမ်းအထက်အကြောင်းအရာကိုသင်္ချာသင်္ကေတလက်ရှိဂိမ်းအစည်းအဝေးအဆုံးသတ်အလိုတော်နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်အများကြီးပို။ သင်နိုင်ဘူး"လှုပ်"ကျော်ကြီးမားတဲ့အလောင်းအစားများနှင့်အိပ်မက်များ၏ရွေ့လျားတက်အကန့်သတ်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊ထိုကဲ့သို့သောအိပ်မက်ရှိနေပေလိမ့်မည်ခြင်းမ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်အစားမများအတွက်အ ? ဖဲချပ်များကြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအားကြီးသောစိတ်ခံစားမှုကို:မှစတင်ပြီးယားယံခြင်းနှင့်မျက်ဒေါသ၊နှင့်အတူအဆုံးသတ်ပျော်ရွှင်မှုမှတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်ရရှိခဲ့ကံ၏။ သင်လိုအပ်ပြင်ဆင်ခံရဖို့အဘို့ဤအ၊သင်လိုအပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သင့်ခံစားချက်။ မဟုတ်ရင်အခက်အခဲ မျှော်လင့်ဖို့အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချအတွက်မကောင်းတဲ့အခြေအနေ။ ထိတွေ့သို့မဟုတ်ခုခံစောင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးပါသည်။ ပုံကိုသိလျှင်ဆွဲထုတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတူတကွအောင်လုံလောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်ခက်ခဲသောအခြေအနေ၊ထို့နောက်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌လှုပ်ရှား။ အောင်ဒါကြောင့်လွယ်ကူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်စောင်း၊ကြိုးစားကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြင်ဘက်မှ။ ဤရယ်စရာအသံ၊ဒါပေမယ့်သင်ကူညီလိမ့်မည်နေဖို့အတွက်ကုန်းပင်လျှင်ရသို့ဒုက္ခကာလအတွင်း။ မသွားပါစေပါဘူးစောင်းသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုတိမ်သင့်ရဲ့စိတ်ထဲရှိရာအမှတ်အောင်ဆိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်အဖြစ်အာရုံစိုက်တတ်နိုင်သမျှလိုအပ်ပါက-နှင့်အတူစားပွဲပေါ်မှာနှင့်တစ်ချိုးယူပါ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်သူတို့အဘို့အလက်ဘယ်မှာသင်ဆုံးရှုံး။ ကိုယ့်တစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၏အခြေအနေအေးအေးဆေးဆေးပတ်ဝန်းကျင်သင့်မသင့်ကိုသင်ပြောပြခဲ့ရာထိုအခါ။အရာအားလုံးပြောကြောင်းမှန်ကန်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မဖန်ဆင်းတော်မူ၏အခြေခံပေါ်မှာရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်၊ထို့နောက်သင်လိုအပ်လုံခြုံစိတ်ချစွာအပေါ်ရွှေ့။. ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ပြုအရာအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်၊ရိုးရိုး။။။ ဒီဖဲချပ်။ နှင့်သင်မလိုအပ်ပါဘူးဘို့အကြည့်ဖို့မင်းတရားနှင့်အယူခံဖို့ဘယ်လောက်အလုပ်သင်ထဲသို့သွင်းထား။ ဒီအကူအညီမည်သူမဆို၊ထိုသို့ပင်ညှဉ်း။ ရုံရှေ့ဆက်သွားရှာဖွေနေ၊ဂရုတစိုက်ချလက်ချအနာဂတ်ဆီသို့။ အပြုသဘောဆောင်သည့်ရှုထောင့်အတွက်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကြီးမားသော–လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးနောက်အရှုံး၊သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသင်မှန်တယ်။ နှင့်ဘာမှမပိုပြီးစိတ်ပျက်မှုတစ်ခုထက်အပြစ်။ တခါအခမဲ့ထိုသို့၊သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဦးခေါင်းသည်မြင့်မားသောကျင်းပခဲ့! မဖြုန်းပါနဲ့သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအပူသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်ရှိလက်သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူ။ အဲဒီအစား၊သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်အမှုအရာသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတစ်လမ်းအဆင့်သာဖြစ်သည်ကိုဆန်းစစ်ရန်လက်စား၊ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုရန်အထူးအဖဲဆော့ဝဲ၊ဂိမ်းနှင့်အတူကစားသမားများ၏အဆင့်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား၊နှင့်၊ဟုတ်ပါတယ်၊အမှုသစ်ကိုသင်ယူဖို့စာသားနှင့်ဗီဒီယိုသောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ကြိုးစားရန်မေးမြန်းလျော်၊မသေဆုံးမေးခွန်းများကဲ့သို့"မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဤအထူးအခြေအနေ?"။ အခြေအနေ?"။ အရေးအပါဆုံးအရာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အကြောင်းအဖဲပါဘူးတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပုံမှန်အတိုင်းစည်းမျဉ်းအသက်တာ၏။ ဒါဟာင်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများရှိပါတယ်၊အရာကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့သူတို့ကို။ အခါတခါနောက်တဖန်သင်တို့ကဲ့သို့ခံစားရတာနစ်အတွက် ဖဲသမုဒ္ဒရာမှု၊ကြိုးစားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲထုတ်အတူတကွ။ အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအရာတို့ကိုသင်အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်။ ဘေးဖယ်ထားရန်သင့် နှင့်လုံးဝသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူရိုးသားသောအခါစိတ်ဖြာနှင့်တွက်ချက်ပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်း။ ဤချဉ်းကပ်မှုပေးဖို့သေချာသည်အပြုသဘောရလဒ်တွေအတွက်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အမှုစတင်ပြီးနောက်။ ကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့သဘောထားကိုဖဲချပ်နှင့်ပင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အသစ်တခုအဆင့်အတွေးထင်နိုင်ပုံအကြောင်းပေါ်ပိုကောင်းအာရုံစူးစိုက်။ နေစေ့စေ့မှအသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အားလုံးမှာအကြိမ်–ဤအရှေ့ဆက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်!.
ဆိုသောဖဲချပ်ယနေ့ရေပန်းစားသည်ကတစ်ဦးဟန်။ ယခု၊၏လူသန်းပေါင်းများစွာအသက်ရှင်သူအားလုံးအပေါ်တိုက်အသည်းအသန်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်း၊အဖဲချပ် ဒါဟာကြီးထွားလာဆနီးပါးနေ့တိုင်း။ ခေတ်သစ်ဖဲချပ်ကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုး၏နံပါတ်ပြိုင်ပွဲ၊ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အနိုင်ရရှိ၊ကမ္ဘာ့အချန်ပီယံ၊အပျော်တမ်းနှင့်ပညာရှင်အဘယ်သူသည်ငွေနှင့်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးငွေနေ့တိုင်းမှာဖဲချပ်ဇယား၊မကြာသေးမီကစတင်သင်ယူဖဲချပ်သို့မဟုတ်ဆက်လက်တိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု။ အားလုံးတို့တွင်အမျိုးအစားများ၊ဒါကြောင့်ကလပ်ဖဲချပ်ရှိကြောင်းရရှိခဲ့မားသောလူကြိုက်များရရှိခဲ့ပြီးအချစ်၏ပရိသတ်များသန်းပေါင်းများစွာဒီဂိမ်း၏။ ကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဖို့စတင်ခဲ့ပြီဆွဲဆောင်၏သန်းပေါင်းများစွာကစားသမား၊အဘယ်သူကိုအများစုချင်တယ်သာဖဲချပ်ကစားပျော်စရာအဘို့၊ဒါပေမယ့်လည်းငွေရှာ။ အဓိကမောင်းနှင်အားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကလပ်ဖဲ၊မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဆိုပါဂိမ်းကိုကစားအင်တာနက်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်အတွက်အထူးတပ်ဆင်ထားအဖွဲ့အစည်းကကစားသမားရဲ့ပြိုင်ဘက်အတူတူလူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အ ၊နှင့်အတူတသမတ်တည်းမြင့်မားအခွင့်အလမ်း။ သင်စတင်ခင်မှာဖဲချပ်ကစားခြင်းအစပြုဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်လိုအပ်သည်အဘယျသို့သူအဘို့ဆင်းထိုင် အဖဲချပ်။ အဆုံးအဖြတ်ဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်သည်အဓိကအချက်စတင်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အမျိုးအစားများ၏၊အချိန်နှင့်စိတ်သဘောထားရှိ၏။ အရေးပါသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လောက်အဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်နိုင်သည်၊သင်အနိုင်ရမပြုသို့မဟုတ်ဝင်ငွေ၊ဒါပေမယ့်ချန်မှာဖဲချပ်။ အဖြတ်အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်၏ဆုံးရှုံးမှုသင်ကူညီလိမ့်မည်မထင်ပိုက်ဆံအကြောင်း၊ဒါပေမယ့်အပြည့်အဝဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊သင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုပြီးမကြာခဏနှင့်နည်းပါးလာစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်။ ပျက်ကွက်ဖို့အနားကိုလိုက်နာအုပ်ချုပ်ကန့်သတ်သောဆုံးရှုံးမှုလိမ့်မည်ဟုမလွှဲမရှောင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပျက်စီးခြင်းတစ်ဦးအစပြု၏ကစားသောအခါအမှန်တကယ်ငွေ။ စတဲ့ဖဲချပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနီးပါးအမြဲပါဝင်ပတ်သက်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှု။ ဥာဏ်၊အတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမားသာကန့်သတ်သူတို့ကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဘို့အဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ဂိမ်းနှုန်းအစည်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်းမှာအနိမ့်ကန့်သတ်အထိရဖို့လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်ရွှေ့ဖို့ဂိမ်းနှင့်အတူပိုပြီးအတွေ့အကြုံ။ ဖဲချပ်ကစားခြင်းတစ်ဦးအဖြစ်သင့်အသိပညာအတွေ့အကြုံပထမဦးဆုံး၊ပြီးနောက် အခွင့်အငွေရှာဖို့။ သင္ယူဖဲချပ်ကစားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ဒါပေမယ့်သင်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့စွမ်းရည်ကိုအားကစားနှင့်အစွမ်းအနိုင်ရဖို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ။ သူတစ်ဦးတည်းသာသွားတယ်အပျော်အပါးအနေဖြင့်ဂိမ်း၊သင်အောင်မြင်အမြင့်ဆုံးရလဒ်များကို။ အဘယ်သူမျှမရှိတယ်မင်းမဟာဗျူဟာပဳေကစားသမားငွေရှာဖို့နေစဉ်မှာထိုင်ဖဲစားပွဲ၊ဒါပေမယ့်အသိပညာနှင့်စွမ်းရည်ကိုသုံးစွဲဖို့ဂိမ်းမဟာဗျူဟာကိုသိသိသာသာတိုးပွါးအခွင့်အလမ်းတွေကို၏အောင်မြင်မှု။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမား၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအတုတ်မှတင်းကျပ်စွာ၏၊အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောသတိနှင့်တိုက်ပွဲများစတင်များအတွက်အိုးနှင့်အတူသာကောင်းသော။ စတင်လျှင်သင်ကစားခြင်းမှာဂရုတစိုက်အနိမ့်ကန့်သတ်များ၊လေ့လာနိုငျဂိမ်းအတွက်အလွန်ရှည်လျားအချိန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊အနိမျ့ကစားပွဲအတွက်အတူပေါင်းစပ်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာဂိမ်းစတိုင်နှင့်အားနည်းသောပြိုင်ဘက်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကိုယ်မိမိ ၊နှင့်ဂိမ်းတစ်ခုစီအစည်းအဝေးအားဖြင့်လိုက်ဆုံးရှုံးမှု၊ထို့နောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်သင်၏ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု၊သူတို့လိမ့်မည်အရေး။ ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိနယ် ပြိုင်ဘက်။ ဒါဟာမလိုအပ်အဘို့အကစားသမားမှာဆင်းထိုင်ဖို့စားပွဲနှင့်ထင်သည်အကောင်းဆုံးကစားသမား။ မကြာခဏဦးဆောင်သောကိုယ်၏အကောင့်တစ်ခု။ ကစားသောအခါအမြတ်အစွန်း၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားသာအနိုင်ရအိုးယူသင့်ထိုင်ခုံနောက်ကျော။ ဒီအပေါ်အခြေခံပြီး၊သင်လိုအပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပိုက်ဆံအဘို့အတိုက်ပွဲတွင်ဘဏ်မသာနှင့်အတူတစ်ဦးအားကြီးသောလက်။ပုံမှာစားပွဲပေါ်ဘယ်အရာကိုမျှမကိုဆိုလိုသည်။ပါကကစားသမားလိုက်နာစောင့်ထိန်းတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ၏ကစားနှင့်ပြဇာတ်သာအားကြီးသောလက်၊ထို့နောက်သူကလုံးဝပါဘူး၊စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသူနားလည်ကြလိမ့်မည်ပြိုင်ဘက်ကသူ့ဂိမ်း။ မှာမိုက်ခရို-ကန့်သတ်၊ကစားသမားတွေသာစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းအရာကိုသူတို့အတွက်မိမိတို့လက်၊သူတို့ကစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ပုံလိုင္း။ ကစားသမားအဖြစ်သင့်အကြောက်ဖို့အတွက်ဘာမှပြောင်းလဲသူ့ဂိမ်းအနေဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်အတိုက်အခံမည်မဟုတ်ပင်သတိထားမိသည်။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်အင်္ဂ။ လွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဖက်ရိုက်နှက်ရန်၊ဒါပေမယ့်အနိမ့်ကန့်သတ်များ၊ကျယ်ပြန့်အများစု၏ကစားသမားစောင့်ကြည့်နပ္၊ဒါကြောင့်မည်သည့်အင်္ဂလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြိုင်ဘက်ကိုပဌနာပြုမည်နည်းတူ လက်ဝါးအလယ်အလတ်ခွန်အား၊ဒါကြောင့်အကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးအားကြီးသောလက်မှအလောင်းအစား။ ထိုင်နှင့်အတူစားပွဲ၌အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ ယူ၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်၏ကြီးမားသောဝန်ဆောင်ခွင့်စားပွဲ၌။ မှုကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအများဆုံးပြိုင်ဘက်ကစားထိထိရောက်ရောက်မှာမိုက်ခရို-ကန့်သတ်၊သူတို့မကြာခဏခေါ်ရန်အားလုံးအတွက်လောင်းနှင့်အတူလက်ဆွဲနှင့်နည်း။ အချိန်ကြာမြင့်စွာနှံများကိုပုံနှင့်တင်းကျပ်စွာဂိမ်းအားငါပေးမည်ကြီးစွာသောအခွင့်အနိုင်ရဖို့ပိုပြီးငွေရှာ။ ရခ်င္ပါရေခြားမြေခြား ။ လိပ်စာ:ဗာအရပ်၊ကမ်း၊၁၃ လမ္းမြို့၊ဖိုးကွက် ၃၄၆၉ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းအိုင်းလင်း.
ဆိုဖဲချပ်ဂိမ်းကဒ်၏အဆိုစစ်တုရင်တစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးဖြစ်ဟန်မှန်ကန်သော၊ဒါပေမဲ့ဒါဟာလုံးဝကိုမထင်ဟပ်မှု၏အနှစ်။ ကဒ်များအတွက်ဖဲချပ်များမှာကိုယ့်တဦးတည်း၏ကစားသမားရဲ့။ များစွာသောအခြေအနေ၊ဒီအရေးကြီးဆုံးအရာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ေနာ္ေဝဖြစ်လာတဲ့ဖဲချပ်ဒဏ္ဍာအားဖြင့်အနိုင်ရအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲများအတွက် ၁၈၀ လူများနှင့်သူ့ကိုမှာရှာဖွေနေကတ်များကိုသာတစ်ချိန်ကနေစဉ်အတွင်းတစ်ခုလုံးကိုပြိုင်ပွဲ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သူသည်သွင်းထားတက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုစောင့်ကြည့်။ ကောင်းစွာ၊အများပျောက်ကွယ်သွားမှဖြစ်နိုင်သောသံသယအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာအဆင့်အ ၊ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ်ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းသူမ:-သူမစဉ်းစားသည်အအောင်မြင်ဆုံးဖဲကစားသမားကနေအနော်ရ၏ရလဒ်များကိုအော့ဖ်လိုင်းပြိုင်ပွဲသူမ၏ဆုချီးမြှင့်ပိုက်ဆံများအတွက်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အများကြီးဖြစ်၏ကစားသမားများအတွက်ဒုတိယအနေအထား၊လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖဲညာဘက်ယခုအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '။ "န့်အသတ်"ဆိုတဲ့အချက်ကိုစကားပြောနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အလှည့်၌သင်တို့ကိုမည်သည့်အခြေအနေ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူပဲ ၁-၂သင်သွားနိုင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်"အားလံုး-"သာ။ များသောအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲအတွက်၊ရှိပါတယ် ၉ လူထိုင်တစ်ချိန်တည်းမှာ။ ပြီးကတည်းကအရှိဆုံးအစွမ်းထက်သောအချက်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်အတိအကျဘယ်မှာကစားသမားထိုင်"အလုပ္အကိုင္"၊အစဉ်အလာရှိပါတယ်၏အဆုံးအဖြတ်"ကြယ်"၏စတင်မီပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ဂိမ်းနေ့က။ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းသားများ၏အလက်လက်ခံတွေ့ဆုံ ၂ မကျြနှာကို-ဆင်းကဒ်သူတို့အခေါ်"အိတ်ကပ်"ကတ်များကို။ ထိုအခါအသုံးျပထမအကျော့၏ကုန်သွယ်။ ကစားသမားမဟုတ်ကြဘူးသောသူဆန္ဒရှိဖို့ဆက်လက်ပါဝင်မှာ၊လက်ပစ်ပယ်သူတို့ရဲ့ကတ်များအတွက်အလွန်။ ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်အရပ်နည်း။ နောက်တစ်ခု၊၃ ဒသကတ်များချထားထွက်ပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ"နပ္"၊ အဝိုင္း၏အရောင်းပြီးစီး၊စတုတ္ထအသိုင်းကဒ်သည်ထွက်ချထား၊အဝိုင္း၏အရောင်းပြီးစီးခဲ့သည်၊နောက်ဆုံးတွင်အခြေခံသိုင်းကဒ်"မြစ်"ဖွင့်လှစ်။ ပန်းတိုင်၏အသီးအသီးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေပြိုင်ဘက်ပစ်ချထွက်သူတို့ရဲ့ကတ်များအတွက်အလွန်အတွင်းမည်သည့်အလံေလည်၊ထိုသို့အားဖြင့်ချုပ်မှတိုက်ပွဲအတွက်၊အိုးသို့မဟုတ်စုဆောင်းပေါင်းစပ် ၅ ကတ်များထက်သာအပြိုင်ဘက်ရဲ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကစားသမားသုံးနိုင်တယ်ဆိုလူမှုအသိုင်းအကတ်များနှင့်အတူ၊သူတို့ရဲ့မျက်နှာ-ဆင်းကဒ်များ။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဦး၏ထွက်စုစုပေါင်း၏၇ ကဒ်များ၊သာ ၅ သုံးပြုကြသည်လျှင်ဤသည်လိုအပ်သောမဟုတ်ပါဘူး၊ကစားသမားသံုးမျမိမိပိတ်ကတ်များမှာအားလုံးသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း။ ပေါင်းစပ်၏ကဒ်များ၊အဖြစ်၎င်းတို့၏များက်၊အကောင်းဆုံးအားဖြင့်သင်ယူနှလုံးမသကဲ့သို့၊မသိပစ်အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်သို့သွား။
ကျနော်တို့ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထိချီတက်ပွဲ၏အမှတ် ဖြစ်ရပ်များအတွက် ၂၀၂၀။ တွင်စတုတ္ထနေရာအစူပါ-မြင့်မားသောတုံးစစ်ပွဲများအတွက်နေရာယူ။၊နွေဦးရာသီ နွေရာသီကိုအွန်လိုင်းပေါ် ။ အစပိုင်းတွင်၊ဒီနှစ်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုထည့်သွင်းအများကြီးကိုတိုက်ရိုက်စီးရီးကအောင်မြင်ဖြစ်ကျင်းပ–မူဖဲ၊၊သန်းပေါင်းများစွာအဆင့်ဆင့်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊အဆိုပါကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုအရေးယူမပါဘဲေသွားလေတိုက်။ ကျော်ကြားသောမြင့်မားသောတုံးရီးဖဲခင်နှင့်စူပါမြင့်မားတုံးပန်းကန်ကနေပြောင်းရွှေ့ဗီးဂတ်ကိုအွန်လိုင်း။ ဧပြီလထဲမှာ၊ဖဲမာစတာကျင်းပခဲ့ရာအုပ်၏အယူအဆအကျော်ကြားဂေါက်သီးအဓိက၊ချန်ပီယံရရှိတဲ့အစိမ်းရောင်အင်္ကျီ။ ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖဲချပ်၊အကၤ်ီသည်မောင်းသောအထည်၊နှင့်သောသူပထမနေရာတွင်တွမ်လာတယ်။ အသီးအသီးသောနေ့ရက်တွေရှိပါတယ်$၁၀၊၀၀၀ နှင့်$၂၅၊၀၀၀ ရာင္းရန္-ေကိုင် နဲ့ ။ ၏သင်တန်း၊အအရေးပါသောအအစိတ်အပိုင်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုဤပြိုင်ပွဲကြီးအိမ်နာမည်၊ကျေးဇူးတင်စကားသောသင်ချက်ချင်းမြင်ရသော မှာစားပွဲအမျက်နှာ ၊လက်စ် ခုနှစ် ၊သုန် နှင့်အခြားသူများ။ အကြားရုရှားစကားပြောကစားသမားတွေ၊ ချက်ချင်းပူးပေါင်းတိုက်ပွဲ။ သူကချောဒုတိယအတွက်$၁၀၊၀၀၀ အပျက်အပေါ်ပထမဦးဆုံးညဥ့်အခါ၊နှင့်အာတော်လေးတည်ငြိမ်တဲ့၊ဒါပေမယ့်သူကစေဘဲအတွက်ကြောင့်ကဲ။ သို့သော်၊အတွက်တွမ်၊သူတည်းခိုထိပ်မှာအစအဦးမှအဆုံး။ အာခေါင်းဆောင်ခဲ့မီနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ။ သို့သော်၊သူတို့ထဲကတစ်ဦးကြီးကိုအဓိကအဖြစ်အပျက်အတွက်$၅၀၊၀၀၀၊အရာသင်အများကြီးဝင်ငွေအချက်များ။ အဆုံး၌အောင်မြင်တဲ့လူငယ် ၊ရိုက်နှက်သာကဲ-ထချစ်မှဗင်နီဇွဲလား၏ကုန်ပစ္စည်း ။ သို့သော်၊ ကစားရီးယိုင်၊ဒါကြောင့်သူကဘဲစီမံခန့်ခွဲဖို့မှီခ်။ ရှိနေဆဲအဆုံး$၁၀၊၀၀၀ င့္အေရး၊ဘယ်မှာအာတိုက်နှင့်အတူတိုတောင်းတဲ့အနှံ၊နှင့်ပြိုင်ဘက်အဘို့အတိုက်ပွဲတွင်ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ၊အခဲ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်မှာအစအဆုံး၊နှင့်ဂရိဘဲကိုယ်အချက်အဆုံးသတ်စီးရီးနှင့်အတူအောင်ပွဲအကြောင်းသူ့ကိုဆောင်ပထမနေရာအတွက်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ။ တွမ်။ အာပြီးဒုတိယအတွမ်၊ဒါပေမယ့်ရှိတစ်ဦးတည်းသာဆုချီးမြှင့်စက်အပြောက်။ တယ်$၅၀၊၀၀၀ နှင့်မောင်းသောအထည်အင်္ကျီ။ နောက်ထပ်အဓိကစီးရီးအတွက်နေရာယူစေခြင်းငှါ။ နာမည်ကျော်စူပါမြင့်မားတုံးပန်းကန်လုံးအတွက် ၂၀၂၀ အချိန်ရှိသည်ဖို့နှစ်ကြိမ်။ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ၊အမြင့်ကြိတ်ကစားသြစတြေးလျအတွက်၊နှင့်မတ်လအတွက်-" နို"။ သူတို့ထင်ခဲ့ကြပြန်တွေ့မှာနွေရာသီအတွက်၊ဒါပေမယ့်အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသောဤအဖြစ်ပျက်သွားမနေ၊တစ်အွန်လိုင်းစီးရီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရာင္းရန္-ဖန်ဆင်းခဲ့သည်အနည်းငယ်ပိုကျိုးနွံ။ အသက်ရှင်သောအတွက်၊အဓိကအအဖြစ်အပျက်အတူကစားအတူအဝယ်အတွက်-$၂၅၀၊၀၀၀၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအဓိကအဖြစ်အပျက်မှကန့်သတ်သည်$၁၀၂၊၀၀၀၊အပေါင်းဘက်၏ဖြစ်ရပ်များ$၁၀၊၀၀၀ နှင့်$၂၅၊၀၀၀။ လျော်အပေါ်ထင်ရှားဖဲခင်းအပါအဝင်၊၏အဆုံးမှာ ၂၀၁၉ အခါသူမှာကစား သာ ၊ဒါပေမယ့်သူပြုမထွန်းလင်းမှာစျေးအကြီးဆုံး ကန့်သတ်အချိန်အကြာကြီး။ ဒီဗစ်တီးနီးပါးတစ်ခုလုံးကိုစီးရီးနှင့်အပြုအလွန်အမင်းအောင်မြင်စွာ။ ပွင်စတင်အရီးနှစ်ဦးနှင့်အတူဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဦးခေါင်း-ယူပီအက်စ်၊ထိုအခါမူကားမည်သုံးဘက်အဖွဲ့တွေအတွင်းတစ်ပါတ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ကိုထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ရလဒ်တွေကိုထင်ခဲ့ဘူးပေးဖို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်မှပြိုင်ဘက်များ၊ဒါပေမယ့် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမြင်။ အာသာခဲ့တပွဲများ၊ဒါပေမဲ့သူလည်းအများကြီးအရှည်ဖြတ်သန်း။ ရှိမှသာသုံးပြိုင်ပွဲကျန်ရစ်သည်အထိအဆုံး၏အတွမ်နှင့်ပွဲကြည့်ပရိသတ်အပေါ် ရုပ်သံလိုင်းဆှဲအပေါ်နောက်တော်သို့လိုက်အဖြစ်အပျက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အရှုံးအဘို့အအာ။ ပွင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးမသွားခဲ့ဘူး၊ကောင်းစွာ၊နှင့်အားလုံးအတွက်အသုံးပြိုင်ပွဲသူဖယ်မီဆု။ အနိုင်ရ အတွက်အစောဆုံးသူတို့ကို၏၊ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက၊သူပြည့်ဝသောစနစ်အတွက်အခြားနှစ်ဦးပြိုင်ပွဲ။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊အတွက်ရှားပါး၊သူသည်ဒုတိယနေရာ၊နောက်ဆုံးတတိယ။ ဒီကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရန်အလွန်ပွင့်ခဲ့သည့်အပေါ်ထောင့်။သာ၊ခဲ့ငါးခုသို့အတွက်၂ အဘို့နှင့်$၁၊၇၉၅၊၃၉၅ အတွက်ဆုချီးမြှင့်ငွေ။အဘယ်သူမျှမအေးမြကၤ်ီကို ၊ဒါပေမယ့်အကျိုးကြီးနေဆဲခံထိုက်–လက်မှတ်ကိုအဓိကအဖြစ်အပျက်အတွက်$၁၀၂၊၀၀၀။ သသောတကယ်တော့ပေးအပ်အရာမဆိုအမှု၌ကစားရန်စီစဉ်ထားကြောင်း၊ဒါကြောင့်ညီမျှငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုး။ အဓိကဖြစ်ရပ်၊သို့သော်၊ထွက်အလုပ်လုပ်အတွက်အာ။ သူထွက်ခေါက်အားဖြင့်အသစ်သော ၊အဘယ်သူသည်ပြီးနေ့ ၁ အဖြစ်ပ်ခေါင်းဆောင်၊ဒါပေမယ့်အဆုံး၌မဟုတ်ခဲ့ပင်သို့အရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စကားမစပ်၊သာ ၅၀၊ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်အစိုင်အခဲဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်$၅၊၀၀၀၊၀၀၀။ တဦးတည်းအပေါ်စျေးအကြီးဆုံး နှစ်တွင်ပျံ ။ ဆမ်နန်ရဲ့ထွက်ပေါက်အနေဖြင့်ပြိုင်ပွဲကြီးလည်းအမှတ်ရ။ ကနေဒါဟုခေါ်ဒန်ခခြှေဲ၏၃-လောင်းကစားတွန်းအားပေးနှင့်အတူအိတ်ကပ်ဝဂ်အတွက်အအေး။ ဆမ်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခခြှေဲခဲ့တဲ့-ကေရဲ့၊ဒါပေမယ့်ဖြေရှင်းဘဲအနိုင်ရ။ သို့သော်၊ခခြှေဲမိမိကိုမိမိတက်အဆုံးသတ်ပြီးပဉ္စမမြောက်။ ဂျက် နှင့်မိုက်ကယ် တွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရှည်ရှည်ခေါင်း-တက်ပွဲ။ ဂျက်ခဲ့ကံကောင်းနှင့်အနိုင်ရပြိုင်ပွဲတတိယအကြိမ်အဖြစ်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်။ အတွက်အနိုင်ရသူကရရှိခဲ့သည်$၁၊၇၇၅၊၀၀၀။ ကျနော်တို့ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထိချီတက်ပွဲ၏အမှတ်ပြဲႏွ အတွက် ၂၀၂၀။ တွင်စတုတ္ထနေရာအစူပါ-မြင့်မားသောတုံးစစ်ပွဲအတွက်နေရာယူအနွေဦးရာသီ နွေရာသီကိုအွန်လိုင်းပေါ်.
အလုပ်လုပ်ကြေးမုံ၏အ-ထအွန်လိုင်းကာစီနိုပေါ်သည်ထင်ရှားအင်တာနက်ပေါ်မှာအပြန်အတွက် ၂၀၁၆။ ထိုကတည်းက၊တိုင်းလောင်းကစားမှသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင့်လျော်ဆုံးဂိမ်းအတွက်။ လက်ရှိတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် အမှန်ဧည့်သည်များထက်ပို ၃၊၆၀၀ မော်ဒယ်ပေါက်စက်များ။ ထိုသူတို့တွင်၊သင်အလွယ်တကူရှာတွေ့နစ္ခု၊ကစားတဲ့၊ဖဲ၊အင်္ဂလိပ်နှင့်ပင် အလောင်းအစားအားကစားအလောင်းအည့္ခ။ တစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်ဆိုက်ကတစ်ခုလုံးအတွက်ရုရှား။ ထို့ကြောင့်၊လောင်းကစားမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်ကိုအသုံးပြု လောင်း ၂၀၂၁။ ဒါကြောင့်လည်းမှတ်သားထိုက်သောဒီေနရာတြင္ရိွေသာ ၊ရူ၊ဒေါ်လာနှင့်ယူရို။ အညီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပွအလောင်းအဆာ၊အဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရွေးချယ်ဖို့ငွေကြေးဟုတူသက်သာအလုပ်လုပ်ခံရ။ ဆိုရင်အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်ပြဿနာများအပေါ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊သူတို့အစဉ်အဆက်အသွယ်နည်းပညာထောက်ပံ့။ ဝန်ထမ်းများလောင်းကစားကလပ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်လောင်းကစားကနေတဆင့်ပတ္သတ္ၿ၊အွန်လိုင်းချက်တင်၊သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောအီးမေးလ်။ လျော်စွာလုပ်ကိုင်တွယ်တက်နိုကြေးမုံမှတ်တိုင်ဖွင့်ပွဲသို့မဟုတ်ကစားသမားတစျအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြားမလိုက်မသွားနိုင်ပါ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ဒီမရှိသလောက်ဖြစ်ပျက်၊ဒါပေမယ့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေနေဆဲပေါ်ထွန်း။ အမှန်မှာလုပ်ဆောင်မှုကိုအွန်လိုင်းဖြစ်ပါသည် ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတွက်ရုရှားနိုင်ငံမစည်းမျဉ်းဥပဒေဖြင့်မည်သည့်လမ်းအတွက်။ အခြားစကားများတွင်၊နို နှစ်ဦးစလုံးသည်ခွင့်မပြုနှင့်မတားမြစ်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်ပိတ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအဘို့အလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းရင်းများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊နို ခဲ့ကြိမ်ကြိမ်ပိတ်မှုကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်ကို:ကံကောင်းစွာ၊အပင်ပြီးနောက်အမည်ဖြင့်ကြေးမုံပိတ်သည်၊ကစားသမားတွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းနှင့်ပြန်လာအပေါ်အလောင်းအစားသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစက်။ အုပ်ချုပ်ရေးလျင်မြန်စွာပြုမူ၊ဒါကြောင့်အမှုဆိုဒ်အသစ်ပစ်လွှတ်နီးပါးချက်ချင်းပြီးနောက်အဟောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။။။။။ တချို့လောင်းကစားနားမလည်ကြဘူးဘယ်မှာကြည့်ဖို့အဘို့အသစ်တစ်ခု ကလပ်မှန်၊အရင်ကဆိုရင်များအတွက်။ တကယ်တော့၊အများအပြားရှိပါတယ်ပြန်သွားဖို့နည်းလမ်းတွေကို၊နှင့်အတူအဟောင်းအကောင့်ကိုအပင်ဆုံးရှုံးသွားမပါဘဲငွေခဲ့တဲ့အတွက်အကောင့်မီခဲ့။။။။။ အကြားအဓိကနည်းလမ်းများရှာဖွေဖို့ကြေးမုံများ၏အတွယ်တက်နိုင်မှတ်ချက်:မိုဘိုင်းဗားရှင်း ဆို့ထားသည်မဟုတ်၊နှင့်ဤသည်၎င်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်။ သငျသညျဆိုပါကဒေါင်းလုပ်အက္ပ္တော့၊အသုံးပြုသူအချက်အရှိသည်မဟုတ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှဝင်ကလပ်အသုံးပြုမိုဘိုင်းဗားရှင်းအစီနို ထိုသို့ဖြန့်ဝေတာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ သင်နိုင်တောင်မှဒေါင်းလုဒ်ကိုတွယ်တက်၍ထိုနေရာသို့မဟုတ်ကစားဖစ္ပါတယ္။ ဆိုရင်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုပါအစီအစဉ်ရှိပါတယ်၊သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါအတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဒေါင်းလုပ်ထံမှဆော့ဖ်ဝဲကိုရှိပါတယ်။ ကလပ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်၊တစ်ဦးကိုအထူးအပိုင်းနှင့်အတူအားလံုးကိုဗားရှင်း။ နှင့်အတူမိုဘိုင်းဗားရှင်း၊သင်အငြိကစားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အနိုင်ရမပါဘဲဖြစ်ခြင်းမှချည်တစ်နေရာတည်း။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအလွန်အဆင်ပြေပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်ပထမဦးဆုံးပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်။ ကတည်းကအခမဲ့၊ဒါကြောင့်ကျိန်းသေတစ်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်။ ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် နိုပေးတဲ့စာရင်းလက်ရှိအင်တာနက်မှန်။ အခြားရွေးချယ်စရာအလုပ်လုပ်လိပ်စာ၏ဤလောင်းကစားကလပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အထူးပြုတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့လိုက်ဖိုရမ်များအကြောင်းဆွေးနွေးရေး၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်အလောင်းကစားလုပ်ငန်း။ အဘယ်သူမျှမ။ ကြေးမုံသည်ဒိုမိန်းအမည်နာမရေးသားကြေးမုံအသုံးပြုသူများအဖို့အဓိကအစီနိုဆာဗာရှိရာတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အလောင်းကစားတည်ထောင်တည်ရှိသည်။ အားလုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဂိမ်းများ၏အဓိကဆိုဒ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်မှန်။ အတွက်နှင့်အတူလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကို၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ၏အချို့နိုင်ငံများအကြောင်းကန့်သတ်ထား၏စစ်ဆင်ရေးလောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ဒေသခံအပေးအရာရှိအင်တာနက်ဆိုဒ်များ၏လောင်းကစားထူထောင်။ လက်လှမ်းဖို့ထပ်မှန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းအပေါ်အမှန်အဘယ်သူမျှမခြားနားသည်မှမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ကစားသမားဖြည့်စွက်ရပါမည်ထွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်၊အတည်ပြုသူတို့၏သဘောတူညီနှင့်အတူပွအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်လင့်ခ်ကနေတဆင့်လက်ခံရရှိအီးမေးလ်များ။
ရွေ့လျားများအတွက်ခေတ်မီလူတစ်ဦးသည်အလွန်အရေးပါအရာ၊ပိုအချိန်ဖြုန်းမ:အလုပ်မှာ၊အလမ်းအပေါ်အားလပ်ရက်အပေါ်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်၊တိုင်းပြည်အတွက်။ အစာရှောင်အရှိန်အဟုန်ကိုလည်းထိအဖဲနယ်ပယ်။ အခုအသုံးပြုသူအများအပြားမှကြိုက်တတ်တဲ့ပေါ်မှာကစားအန္းဖုန်းများအစားကွန်ပျူတာ–ဤသည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူကြိုက်။ ပေးထားသောအထူးဆော့ဗ်ဝဲစုဆောင်းခဲ့စာရင်းဇယားနှင့်သင်္ချာတွက်ချက်မှုအချိန်အကြာ၊ဖဲအစီအစဉ်များအတွက်အန္းဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ယနေ့အချိန်တွင်၊အများအပြားရှိပါတယ်သုံးချလွယ်ကူချောမွေ့ဖို့ဒီဇိုင်းများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်မှာကစားသမားအ။သူတို့လုပ်ဆောင်မားသောအရေအလုပ်များ:သူတို့ပေးသတင်းအချက်အပေါ်စည်းမျဉ်းများအတွက်ချက်အိုးကွဲလွဲမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအချို့ပေါင်းစပ်ထွက်ကျသွားစုဆောင်း၊စာရင်းဇယားများ၊ခွင့်ပြုသုံးစွဲဖို့အည့္ခစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဟာဗျူဟာနှင့်အခြားအသုံးဝင်သော။ ရှိ၏လုံလောက်သောအရေအဖဲအက္ပ္မ်ားကို၊နှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည်မတားမြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဆုံးခန်း၊ဒါကြောင့်သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကို၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲလျက်ရှိ။ သင်ရုံရန်လိုအပ်ရှာဖွေရန်အစီအစဉ်ကိုက်ညီသောသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို။ ရဲ့တစ်ဦးကြည့်ကြရမှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့လူသိများတဲ့အန္းစီအစဉ်များရရှိခဲ့ကြပြီယုံကြည်မှုနှင့်အဆုံးချော့မော့သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ တဦးကိုလက်တွင်၊ဒီ၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ဒါပေမယ့်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ကဟန်များ၊မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ခုသီးခြားလျှောက်လွှာ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကဖြစ်ပါတယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထုတ်၏စာရင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ဖွင့်ဆိုချက်အလက်တယ်၊ဒါကြောင့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၊အဝဲဖဲချပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်တည်ရှိမှုနှင့်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုအလွန်မြင့်အားဖြင့်သက်သေပြသကဲ့သို့၊ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒေါင်းလုပ်စျေးကွက်အပေါ်။ အက္ပ္သင်လိုအပ်ဟုခေါ်သည်ဖဲချပ်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်–၏ပုံစံအတွက်အခြေခံစာရင်း၊ဖဲပေါင်းစပ်ပေးထားကြသည်၊နှင့်ပေါ်နှိပ်ခြင်းတစ်ခု၏အချက်ဖွင့်လှစ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်အပိုဆောင်းရမှတ်သင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဆင်ပြေအတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမားတွေအတွက်ပြိုင်ပွဲ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဤအမှု၌၊အဆိုပါဖုန်းသည်အစဉ်အမြဲလက်မှာ၊သင်အလွယ်တကူအမြင်အရိပ်အမြွက်။ ရှိပါတယ်၊ဟုတ်ပါတယ်၊တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို၊အရာအတွက်မသာပေါင်းစပ်ပေးကြသည်နှင့်ဘာမျှမပို။ သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သုံးစံရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်:"ဖဲချပ်လက်"၊"ဖဲပေါင်းစပ်"၊"စာရင်းများပေါင်းစပ်"၊"ဖဲချပ်လက်"။ အထူးရှိပါတယ်အကေးရှင်းကလုပ်ဆောင်မှသာလက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်။ ဤပါဝင်သည်ဖဲလမ်းညွှန်၊အရာအခြေခံအဖဲချပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ပေါင်းစပ်။ ထို့အပြင်အတွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '၊သင်သင်ယူနိုင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့်ငါးကဒ်ဆွဲပါဖဲချပ်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုအစဥ္တြင္အများအပြားအခန်းကဏ္ဍ၊အသီးအသီးအသုံးဝင်သောနှင့်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအတွက်။ "အစလက်ဇယား"တြင္ပေးအဖိုးတန်အပေါ်လမ်းညွှန်မှုကိုအတူကစားခြင်းအခြို့သောစကတ္မ်ား၊အရာမြားကိုအကောင်းဆုံးစွန့်ပစ်ချက်ချင်းနှင့်အရာမြားသွားအပေါင်းတို့သည်လမ်း။ "အကြောင်းသိကောင်းစရာများ"အပိုင်း" ပါဝင်သည်များအတွက်အကြံပြုချက်များအမျိုးအစားသုံးမျိုးကစားသမား:အရင်ကဆိုရင်များ၊အဆင့်မြင့်၊အဆိုး။ အသီးအသီးအမျိုးအစား၊အကြံပေးချက်များပေးအပ်ထားပါသည်အဆိုအရသူတို့ရဲ့အဆင့်မှရိုးရှင်းတဲ့။ လည်းအင်္ဂါတစ်မျက်စိကန်းပဳခ်ိန္၊အသုံးကိရိယာကစားမှာတကယ့်စားပွဲသင်ကိုပြင်ဆင်ကူညီဖို့ရှောင်ရှားပျောက်ဆုံးနေအလောင်းအစားကိုတိုးမြှင့်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သာအားနည်းချက်အစီအစဉ်၏အကြောင်းအပြည့်အဝဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၊စျေးနှုန်းမြင့်လွန်းမ–$၁။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များထိုကဲ့သို့သောပလီကေးရှင်းကိုလျှော့ချဖို့တစ်မူလတန်းအစား-ကြိုဆို၏အချို့သောအချိန်ကာလတွေအတွက်လိုအပ်သည်မြှင့်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပြိုင်ပွဲအတွက်။ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အိမ်ပြိုင်ပွဲ၊အများကြီးပိုအဆင်ပြေထက်သာမန်နာရီနှင့် ။ များအတွက်စျေးကွက်အအန္းကိုင္မ်ားအတော်များများထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်:ပဳခ်ိန္၊စကားပြောဖဲအချိန်၊ဖဲရင္ဘတ္စကန့်သတ်၊ဖဲရင္ဘတ္စနှင့်အခြားသူများ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးအကြီးမဖြစ်အက္ပ္ကိုမဆိုအဖဲချပ်။ ဒါကြောင့်အားလုံးအားဖြင့်သုံးကစားသမားခြွင်းချက်မပါဘဲ၊နှစ်ဦးစလုံးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အပျော်တမ်း။ တဦးတည်း၏အဏန်းရွေးချယ်စရာ အခမဲ့ဖဲချပ်ဏန်းသည်။ ကေးရှင်းအရမ်းရိုးရှင်းစွာ:သင်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်စတင်ကဒ်များအတွက်အထူးလယ်ပြင်နှင့်အဖြစ်အသိုင်းအကတ်များပေါ်တွင်ပေါ်လာသောဇယား၊သူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ အဆိုပါစနစ်တွက်ချက်အိုးဖစ္တန္စြမ္း၊ရှယ်ယာနှင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုစုဆောင်း၏အချို့ပေါင်းစပ်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်။ အချို့သောအစီအစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်သံထ၊အရာသင်သည်ထွက်ကူညီပေးသည်အခါသင်ကစားနေကြသည်အပေါ်အများအပြားကျောက်ပြားကိုမှာအတူတူပင်အချိန်နှင့်လိုအပ်ဖြစ်စေတစ်ဦးအမြန်ရွှေ့။ ရှိပါတယ်ကိုလည်းအထူးဂဏန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတရုတ်ဖဲချပ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊တရုတ်ဖဲဏန္းေလွ်ာက္လႊာကိုတွက်ချက်အသုံးပြုသူရဲ့ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ရမှတ်၊အရာဖြစ်ကြောင်းအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးလက်။ တစ်မူထူးခြားသောအက်ပ်ထိုက်အထူးဖော်ပြထားခြင်း။ ပါဝင်သည်အားလုံးနီးပါးကိုအင်္ဂါရပ်များ၏အထက်ပါအစီအစဉ်များ:အဖဲဏန်းပေါင်းစက်၊စားပွဲတစ်ခုပေါင်းစပ်၏၊နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်လူကြိုက်များသောအမျိုးအစားများ၊အပဳခ်ိန္၊ဆောင်းပါးနှင့်အကြံပေးချက်များအပေါ်ဂိမ်းဟာဗျူဟာ။ ဆော့ဝဲလ်အဖြစ်လာနိုင်ပါသည်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လက်ထောက်။ အဲအထူးစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းဖန်တီးကြောင်း၏ပုံစံအတွက်လေ့ကျင့်ရေး ခိုင်မာသင့်အသိပညာဖဲချပ်။ မှတ်သားဖွယ်ဥပမာသောစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့်ခေါ်ဆိုခ၏အခေါက်။ ပထမဦးဆုံးအတွက်၊သင်လျှောက်လွှာတွက်ချက်ရန်လိုအပ်အိုးလေး၊ဒုတိယအတွက်-ကိုရှေးခယျြညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဖုန်းခေါ်ပါစေသို့မဟုတ်အခေါက်၊အပေါ်အခြေခံပြီးအခြေအနေ။ အလွန်ကြီးစွာသောအထောက်အဆိုအဖဲချပ်။ ကစားသမားညွှန်ပြရမယ်သူ့အိတ်ကပ်ကတ်များ၊အလုပ္အကိုင္စားပွဲ၌၊နှင့်ပြိုင်ဘက်သူ ။ အပေါ်အခြေခံပြီးသတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိ၊အစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးအကြံဉာဏ်ဘယ်လိုပေါ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လက်ရှိအခြေအနေ။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်း၏ဆော့ဝဲများအတွက်ပြည်တွင်းအသုံးပြုသူများအကြောင်းသီးသန့်ဖြန့်ဝေ။ အဆိုပါအစီအစဉ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်မဟုတ်သာ။ များအပြားမျိုးရှိပါတယ်အခြားအက်ပ်အပေါ်။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ဒေါင်းလုဒ်သူတို့ကိုသီးသန့်မွထံမှသို့မဟုတ်တရားဝင်တင္သြင္းဆိုဒ်များ၊မသကဲ့သို့ကူးစက်ဖို့သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူဗိုင်းရပ်စ်များ။.
အတော်လေးမကြာသေးမီက၊ရှိသတင်းအချက်အ သံသယရှိသူ၏ပြိုင်ဘက်လိမ်လည်မှု။ သို့သော်၊ဤလိမ်လည်လုံးေ။ အဆိုပါအချက်အလားအလာကွဲလွဲကြသည်နည်းသင်မျှော်လင့်နိုင်ရရန်အခါမဟုတ်၊သားကအိုး၌။ အလားအလာကွဲလွဲမှုများတွက်ချက်ရိုးရှင်းတဲ့တွက်ချက်မှုလေး၊ကြာသောအကောင့်သို့အခြားသတင်းအချက်မှတပါးအရွယ်အစား၏အိုး–ကျဉ်းမြောင်းသောကစားကွင်းအားဖြင့်။ သင့်ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်အတွက်ဖဲဂိမ်းအနိုင်ရမှပိုက်ဆံ၊
ကျွန်တော်သိသည်၊ဒီဖဲချပ်ရှိသည်၊ငါသည်အစဉ်အမြဲအပေါ်ခဲ့ပြီထိုကဲ့သို့သောလက်ကိုဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့။ အပေါ်ဖက်၊သွားအတွက်နှင့်အထွက်ငါ၊ငါကစားတ ပေါ် ေဒၚလာ ၀။၂၇၊အတူငွေရှာ နှင့်အတူ'ထုပ်'၊ငါဖြတ်သန်းသွားပိုက်ဆံ၊ပြီးတော့မနေ့ကငါနေဆဲကစားထီ မှာ ၃၆၅၊ငါရှောက်သွားပိုက်ဆံနောက်တဖန်အ၊ပြီးနောက်အဖြစ်မကြာမီငါသွားအဖြစ်ရှိပါတယ်၊တူညီသောကဒ်လျှို့ဝှက်အစပြုတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကန်-မြည်း၊မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီဖဲချပ်ခန်းဇင္ဘာလတြင္ကစားခဲ့ ၅ ထိုကဲ့သို့သော လုံးငွေသွား၏၊ထိုအခါမူကား၊မမှာအားလုံး၊သို့မဟုတ်ပျံတက်နှင့်အတူ 'အိမ်'၊အမွတ္ငွား၊ ချင်နှင့် ၂၅$နှင့်အတူဤအသီးအသီးကီလိုအထီချိုးဖျက်ဖို့၂၅၀$အိုးဘယ်လိုချင်တာကျွန်မဝမ်းသာပြီးသားဖြစ်မှာထိပ်တန်း၁၀ အတွမ်မှာရုပ်သိမ်းပြီး ၃၆၅ ဖဲချပ်၊ဆိုလိုတာကအပြင်အနိုင်ရမှ ၊အချို့သောအခြားငွေလဲကြလိမ့်မည် ငါယေဘုယျအားဘူး ငါနားလည်မောင်းထုတ်သောသူတို့အ သာ $၁-၂၊မမောင်းအတွက်ထီ ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တူညီသောအ-ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုနဲ့တူ၊ငင်သို့မဟုတ်ငွေသားဒါကြောင့်ပုံမှန်င်။ ငါဘာကိုအသစ်သောအရာစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်:မင်္ဂလာပါ၊ဒီနေရာမှာကိုယ့်မှာကြည့်သင်မည်သို့လှိမ့်တဲနှင့်ငါထင်နှင့်နိုင်ဝန်သူတို့ကိုတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းအတွက်နောက်ခံအကြှနျုပျ၏အစည်းအဝေးနှင့်ခုတ်အပိုဆောင်းလူးသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားချိန်ချိန်မှာ အလောင်းကစားကုမ္ပဏီနှင့်မပေးပါဘူးလောင်းကစားဆောင်မှုများကို၎င်း၏ဧည့်သည်များ။ အကူအဘို့အလက်ဆက်သွယ်ပေးပါ။.
၏ဘုဖဲ ၂ ယံ ၃။၀။၁၈
ဘုဖဲချပ် ၂ ယံကြီးစွာသောဂိမ်းသင်တို့အဘို့အအန္းတက်ဘလက်! အနိုင်ရတိုင်းအပြေး၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသည်နှင့်ကျောက်မီးသွေးသတ္တုတွင်း၊ထိုသို့အားဖြင့် အားလုံး ၁၈ မြို့တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏။ သင်ပို့ဖို့ရိုင်းအနောက်ဘက်တွင်၊ဘယ်မှာသင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဟောင်းကိုအေ့စ်ဒီဂိမ်း၏။ ဒါဟာဖို့အချိန်င့်သုံးသင့်အသိပညာ၏အဖဲချပ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှသေးငယ်တဲ့အမှုအရာ:နိုင်ရလည်နေရာမြင့်မားတဲ့ကစားပွဲအတွက်၊နှင့်ကြီးမားသောဆု။ ဖြည်းဖြည်းချင်း၊သင်ရလိမ့်မယ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်။ အဆိုပါဂိမ်းအံ့သြဖွယ်အင်္ဂါကည္လင္ျဂရပ်ဖစ်၊ထက်ပိုပြီး ၈၀ စမတ်ဆန့်ကျင်၊နှင့်လှပသောမြို့တည်နေရာ။ ယူစိတ်အပိုင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောပမာဏ၊ခရီးသွားကျင်မြို့နှင့်အများကြီးပို။
စိတ်ဝင်စားစရာအွန်လိုင်းဂိမ်း၏ဘုဖဲ ၂ အတူမူရင်းအမည်၏ဘုဖဲ ၂ ကတင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ဒါကြောင့်ပြီးသားကစား ၉။ အနည္း ၄။၉ ၅ႏွင့္ ၁၂၉။ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်:ညင်း။ဖွံ့ဖြိုးအတွက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်ကွန်ပျူတာများအားလုံးသုံးေရ-ကစားအတွက်အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ည့္ခမပါဘဲကျန်ရစ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။နေ့စွဲကဆက်ပြောသည်:၀၆။၂၇။၂၀၁၉ ဘာသာစကားဗားရှင်း၏အဝက်ဘ်ဆိုက်:🇷🇺ရုရှားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အွန်လိုင်းဂိမ်း၏ဘုဖဲ ၂ အတူမူရင်းအမည်၏ဘုဖဲ ၂ ကတင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဖွံ့ဖြိုးအတွက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်ကွန်ပျူတာများအားလုံးသုံးေရ-ကစားအတွက်အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ည့္ခမပါဘဲကျန်ရစ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။
ရောမ ၊ဖဲချပ်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် သင်တန်း-တုိက္တြန္းအလီ
ဤစာအုပ်သည်ကျမ်းစာ၏အခြေခံပေါ်မှာအထူးနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၏အစာရေးဆရာနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပေးမှစာဖတ်သူလိုအပ်နှင့်လုံလောက်သောအိုရီသင္တန္းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂိမ်း၏ဖဲချပ်၊နှင့်အဘို့အနောက်ထပ်တိုးတက်မှုသူ၏ဖဲချပ်။ အဆိုပါဂိမ်းကစားလိုအပ်သုံးအမျိုးအစားများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေကစားသမား–ယုတ္တိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊နှင့်အခန်းကဏ္ဍ၏အဆုံးစွန်နှစ်ခုသည်သိသိသာသာကြီး။ ဤစာအုပ်သည်အဓိကမြှုပ်နှံရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစိတ်အပိုင်း။ အလုပ်လုပ်ကိုင်အပေါ်၊အဆိုပါစာရေးဆရာ ရည်မှန်းချက်ကြီးများကိုစာဖတ်သူနှင့်အတူအခွင့်အရှင်၏အခြေခံအချက်များအောင်မြင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '၊လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံဖဲ၊မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်ယူဆရသည်အကြောင်းစာဖတ်သူကိုအသားနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖဲချပ်နှင့်အသိအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်ဂိမ်း၏အထွေထွေနှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အကိုင် အထူးသဖြင့်။ အဆိုပါစာအုပ်ကိုရေးသားလျှင်အဖြစ်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်သာ၊ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းအနံပါတ်များနှင့်ပေမယ့်၊အရိုးရှင်းဆုံး၊ဒါပေမယ့်နေဆဲဖော်မြူလာ။အတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤတစ်စုံတစ်ဦးကခြောက်လှစေရန်နှင့်ချွတ်။ နေသောသူတို့အဘို့ပြီးသားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၏အခြေခံဖဲ၊ငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ဖတ်ကြည့်မှာဂိမ်းမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထောင့်၊သိသိသာသာတိုးမြှင့်အဆင့်ကိုနားလည်ခြင်း။ အဆိုပါစာအုပ်ကိုရေးသားလျှင်အဖြစ်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်သာ၊ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းအနံပါတ်များနှင့်ပေမယ့်၊အရိုးရှင်းဆုံး၊ဒါပေမယ့်နေဆဲဖော်မြူလာ။အတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤတစ်စုံတစ်ဦးကခြောက်လှစေရန်နှင့်ချွတ်။ နေသောသူတို့အဘို့ပြီးသားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၏အခြေခံဖဲ၊ငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ဖတ်ကြည့်မှာဂိမ်းမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထောင့်၊သိသိသာသာတိုးမြှင့်အဆင့်ကိုနားလည်ခြင်း။ အကောင်းဆုံးစာအုပ်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအခြေခံအကျဆုံးအခြေခံမူများ ဆဖဲချပ်။ ဤစာအုပ်သည်နေသောသူတို့အဘို့ပြီးသားနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဆိုပါဂိမ်းကိုကစားပြီးနောက်အနည်းငယ်ဆုံးဖြတ်တိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့အဖဲချပ်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစာအုပ်ပေးသည်သောအခြေခံအခြေခံအဖဲချပ်။ ဤစာအုပ်သည်နေသောသူတို့အဘို့ပြီးသားနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဆိုပါဂိမ်းကိုကစားပြီးနောက်အနည်းငယ်ဆုံးဖြတ်တိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့အဖဲချပ်။ အားသာချက်ယူဤအမြှင့်တင်ရေး၊ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်စာအုပ်သင့်ရဲ့စျေးဝယ်လှည်း။ သင်သည်ဤလုပ်နိုင်ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်အသီးအသီး၏စာအုပ်ကို၊သို့မဟုတ်အထွေထွေစာရင်း:
အတွက်ဟက်ကာမဂ္ဂဇင်းအတွက်ကုဒ်အပိုင်း၊တစ်ဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကြောင်းအရေးအသားအဖဲဘော့ကဖော်ပြ၏ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရအပေါ်အခြေခံလက်နှင့်ကတ်များအပေါ်နပ္တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဖဲချပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှအကြီးဆုံးဖဲအခန်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအလောင်းအစားကန့်သတ်-အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်၊အိုးကန့်သတ်၊ပုံသေကန့်သတ်ထားသော သောဘလော့ဂ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြောင်း၊အထူးသဖြင့်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကဖန်တီးအဖဲရယ် အရွယ်ရောက်၊လဲ့လူတစ်ဦးရေးသားမည်မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကိုသောက်သုံးမကျဖြစ်သောကြောင့်၊ငါ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှအသုံးပွုနိုငျ၊လိမ်လည်၊ဝိုင်နှင့်အခြားအသင့်အတန်းဖော်များ။ မတင္ၾက၊အင်တာနက်ကို၊အနားယူနှင့်ပျော်စရာရှိသည်
ကစားတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် မည်သည့်အချိန်တွင်၊ညာဘက်ကိုအပေါ်မျက်နှာပြင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာ။ ထောင်ထဲသောင်းကျန်းမှုကိုခွင့်ပြုကစားဂန္ထဝင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '။ မြှင်နှင့်စမ်းသပ်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်စိန်ခေါ်မှုကနေကစားသမားတွေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ကစားမှာအွန်လိုင်းဖဲချပ်နိုနဲ့ရ ၆၀၊၀၀၀ အခမဲ့ချစ်ပ်အခါပထမဦးဆုံးသင်ဂိမ်းကိုရိုက်ထည့်ပြီးမှတက် ၄၅၊၀၀၀၊၀၀၀ သွင်ဒေါ်လာအဖြစ်နေ့စဉ်ဆုကြေးငွေ။ အတွက်ထောင်ထဲသောင်းကျန်း-တက္ကဆက်ပြည်နယ် ၊အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်သင် ၅၉ ကစားသမားတွေမှာစားပွဲ၊ပူးပေါင်းလိခ်နှင့်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်။ ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစားပါစေ၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အကြီးဆုံးအဝန်းကနေကစားသမားတွေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ဒေါင်းလုပ်ထောင်ထဲသောင်းကျန်း-တက္ကဆက်ပြည်နယ် ကနေ အခမဲ့။ ရှယ်ယာသင့်ရဲ့အတွေ့ကြုံဂိမ်း၏မှတ်ချက်များအတွက်ထိုအဖို့မေ့လျော့ကြဘူးနှုန်း။
ဂိမ်းအတွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ် ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပုံစံအမြင့်ဆုံးပေါင်းစပ်ငါးကတ်များ။ ကဖန်တီးဖို့၊ကျနော်တို့အသုံးပြုခြင်း၏တစ်ဦးအစုံငါးသိုင်းကတ်များအပေါ်ဇယားနှင့်နှစ်ဦးအပေါ်လက်။ ဒီနေရာမှာအချို့အရေးကွီးပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတွက်ဖဲချပ်ပေါင်းစပ်:မစတင်မီအဖဲချပ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊သင်သည်သတ်မှတ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အနေအထား။ ဒီအနေအထားမှလုိုက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အနေကာလအတွင်းအလက်။ အများစုကတော့၊အကုန်ပထမအကျော့အတွက်ဂိမ်း၏ကစားသမားအထိုင်ခဲ့သည့်အတွက်အရပ်မှာစားပွဲ၊သူတာဝန်ပေးတဲ့အထူးပ်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုစာနှင့်အတူ"ဃ"ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လက်ရႊကစားသမားပါ။ ဖဲ-အယူဆအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာစားပွဲ၊အသီးအသီးပတ်လည်တွင်အဆိုပါကစားသမားကိုနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊အရာကိုမသိလှုပ်ရှားသူ၏ပြိုင်ဘက်စေ။ တွင်-အွန်လိုင်းဂိမ်းအတွက် အများစုအတွက်အသက်ရှင်ပြိုင်ပွဲ၊အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အနေအထားသာႏၲရအဖြစ်ကတ်များကိုအလျောက်အားဖြင့်အရောင်းစက်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ရိုးရှင်းစွာအတင်ထား၊မှောင်မိုက်ဝန်ဆောင်မဖြစ်မနေနည်းသော မှဒုတိယအနေဖြင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်ကိုင် '၊နှစ်ခုရှိပါတယ်မျက်စိကန်းသောနည်း:အသေးစားမျက်စိကန်းနှင့်ကြီးမားသောမကန်း။ ပထမဦးဆုံးကစားသမားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ငွေပေးချေအသေးစားမျက်စိကန်း။ ကြီးမားတဲ့မျက်စိကန်းသောအားဖြင့်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်မြင့်မားအဖြစ်အသေးစားကာအခကစားသမား၏ဘယ်ဘက်မှအသေးစားမျက်စိကန်း။ အလောင်းအမြင့်မှာမှောင်မိုက်ပြသပြီးပမာဏအနည်းအတွက်ဒီဂိမ်း။ အများစုကတော့မကြာခဏရွေးချယ်တဲ့အခါစားပွဲ၊ကစားသမားတာဝန်ခံညီမျှ ၁၀၀ ကြီးမားတဲ့ပရောဂျက်။ ဒါကြောင့်၊ကျနော်တို့ကဖြုန်းချင်ပါ ၂၀၀ ရူပေါ်ဂိမ်းအဖြစ်၊ထို့နောက်ကျနော်တို့ရမှာဆင်းထိုင်များစားပွဲပေါ်မှာနှင့်အတူစားပွဲပေါ်မှာ-၁ ၂ ရူ။ သာပြိုင်ပွဲကြီး၊လောင်းကြေးတိုးမြှင့်သည့်အခါတယောအရေအတွက်မိနစ်ကစား၊ဤသို့ပေးကမ်းဂိမ်းကိုပိုမိုအရှိန်အဟုန်။ ပြီးနောက်အဆိုပါကတ်များကိုအလျောက်၊ပထမအကျော့၏ကုန်သွယ်စတင်၊ပထမအ ကစားသမား၏ဘယ်ဘက်မှကြီးမားကာဒီအနေအထား ဟုခေါ်အောက်မှာသေနတ်သို့မဟုတ် အနေအထားအတွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်။ ဒီကစားသမားသုံးရွေးချယ်စရာကနေရွေးချယ်ဖို့:သူကဒ်များကိုစွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်၊ကြောင်း၊ပစ်ပယ်သူကဒ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲချစ်ပ်သူကမယူပါဘူးအစိတ်အပိုင်းအတွက်နောက်ထပ်ကစား၊သူနိုင်၊ဖုန်းခေါ်ပါစေ၊အလုပ်၊သူ၏အလောင်းအကြီးကြီးမားမားမျက်စိကန်း။ သင်သည်လည်း၊အ၊ကစားထက်ပိုကြီးမားကာအလောင်းအစားကိုမြှင့်တင်ရမည်မှာအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ကဲ့သို့ကြီးမားသောကြီးမားတဲ့အကာအလျှင်အကြီးမျက်စိကန်းသည် ၄၊ပြီးတော့အနိမ့်ဆုံးမြှင့်သည် ၈။ အသီးအသီးနောက်ဆက်တွဲကစားသမားနိုင်အောင်တူညီသောဆုံးဖြတ်ချက်။ အခါအကြို-ညႇပ္ဖိကုန်သွယ်ကျော်ဗိုလ်လုပွဲ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့်ဖန်ဆင်းအားလုံးသင်တန်းသားများ၊အခညႇပ္ဖိထင်ရှားနေသည်။ အခညွပ္ဖိနပ္အသုံးအသိုင်းအကြောင်းကတ်များများမှာထွက်ချထား၏အလယ်၌။ ဤရွေ့ကားကတ်များကိုသုံးနိုင်မည်အားဖြင့်မည်သည့်များ၏အကြွင်းအကျန်ကစားသမားတွေဂိမ်းအတွက်ကိုဖန်တီးရန် ၅-ကဒ်ပေါင်းစပ်၊သင်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအစုံကတ်များ:၂ ကတ်များ ၃ ကနေကဒ်ကိုစားပွဲပေါ်မှာ၊၁ ကဒ်အတွက်လက် ၄ ကနေကဒ်ကိုစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ် ၀ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကတ်များ ၅ ကတ်များကိုပါဇယား။ နောက်နပ္ကစား နောက်ထပ်ကုန်သွယ်အောက်ပါအတိုင်း၊အရာအားဖြင့်စတင်ခဲ့ကစားသမားထိုင်ဖို့အကုန်၏။ ကစားသမားနိုင်သည်ဖြစ်စေစစ်ဆေးပါသို့မဟုတ်အလောင်းအစား။ အသီးအသီးနောက်ဆက်တွဲကစားသမားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်အလောင်းအစားများရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမဆြဲမီ၊တုံ့ပြန်ဖို့အလောင်းအစား၊မြှင့်တင်တိုး၊သို့မဟုတ်ခြံအခြံ၊ပဲစွာသူတို့ရှေ့မှာပြုသကဲ့သို့အနပ္။ အဆုံးမှာအဝိုင္း၏အလောင်း၊စတုတ္ထအသိုင်းကဒ်၊အလှည့်၊အပေါ်ထားရှိစားပွဲများ၊နှင့်အခြားပတ်ပတ်လည်အများအနည်းအလုပ်အပေါ်တူညီသောအခြေခံမူများဖြစ်ပြီးနောက်အနပ္။ ပြီးစီးပြီးနောက်၊အကြွင်းအကျန်ကစားသမားတွေဂိမ်းအတွက်ကတ်များကိုပြရန်၊ဒါခေါ်"ဖစ္သြားေ"နှင့်ကောက်ရေကူးကန်ချစ်ပ်များ၏အဝင်အကြောင်းကြွားရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ် ၅-ကဒ်များ။ ပြီးနောက်လက်ဖြစ်ပြီး၊အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပ်ရွေ့တဦးတည်းအနေအထားလက်ဝဲဘက်နှင့်ကျနော်တို့ကစတင်ပြီးနောက်။ သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝန်ဆောင်မှုပေး။ သင်တွေ့လိမ့်မည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာ၏ပြိုင်ဖက်ကနေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့နှင့်ကြီးမားသောအကွာအဝေးအတွက်ရရှိနိုင်။ ပြိုင်ပွဲအခမဲ့သို့မဟုတ်နှင့်အတူတစ်-အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၏့$ အနည်းငယ်အဆင့်အဖြစ်ဂိမ်းများနှင့်ငွေသားမှာအနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်အ ၁ ၂ ရာခိုင်နှုန်း။ စတင်ရန်ကောင်းတစ်လမ်းသင့်ရဲ့ဖဲချပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်အားကစားဂိမ်းနှင့်အတူအိမ်မှာမိတ်ဆွေကောင်း။ သငျသညျအဘယျသို့အဘို့လိုအပ်ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းအပြင်အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ? ချစ်ပ်၊ကတ်များတစ်ကုန်းပတ်နှင့်အပိုင်းအစ၏။ တခြားအရာအားလုံးသင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အောက်မှာတွေ့လိမ့်မည်ပေါ်အချို့သောအကြံပေးချက်များမည်သို့စုစည်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအရာများ၏အရေအခွံ။ တစ်ဦးစံဂိမ်းထဲမှာ၊ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တသေတ္တာခွံများ၊အမှုသည်၊ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးခရီးဆောင်အိတ် ၅၀၀ ချစ်ပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောဂိုဏ်းဂဏ၊ဤလုံလောက်တဲ့ဖြစ်သင့်အတွက်အခမဲ့အိမ်မှာဂိမ်း။ ဒါဟာပြီးသားအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကစားနှင့်မည်မျှအချိန်ဖြုန်းချင်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံကြောင်းရဲ့အစမှာဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းသားများ၏ရှိရမည်တစု၏၅၀ ကြီးမားသောပရောဂျက်။ လျှင်သင်ပိုပြီးအချိန်ရှိသည်ကစားရန်၊အသီးနှံများကိုပုံနိုင်ပါတယ် ကြီးနှင့်တက်အောင် ၇၀၊၁၀၀၊သို့မဟုတ်အပင် ၁၅၀ ကြီးမားတဲ့ပရောဂျက်။ အချို့ဖဲချပ်အစုံဆံ့ချစ်ပ်နှင့်အတူဂိုဏ်းဂဏနှင့်တော့ရှိပါတယ်နည်းပါးလာပြဿနာတွေ။ သိသာထင်ရှားသော ၏အစိတ်အပိုင်းအစုံများအတွက်ဂိမ်းအတွက်ဖဲချပ်များပါဝင်ပါသည်သောချစ်ပ်များ၏အဘယ်သူမျှမငွေသား။ ရှေ့တော်၌ထိုဂိမ်း၊သင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သောပ်တစ်ဦး၏မျက်နှာတန်ဖိုး။ ကစားသမား၌ထိုင်ထိုင်ခုံနံပါတ်ရှစ်၊ကိုး၊တစ်ဆယ်ကစားသမားျဒါကြောင့်-ဟုခေါ်ထား၏။ အောက်မေ့ထိုက်ပေ၏အနောက်ဆုံးကစားသမား"ကြယ်"။ အဲဒီကစားသမားခလုတ်များကျယ်ပြန့်အသိပညာအ။ မှာအကိမ်တစ်ခုစီ၏နည်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အခါသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်' သို့မဟုတ်နည်း၊သူတို့အင်္ဂနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးမြှင့်လျှင်ပင်၊သူတို့ကတ်များကိုအတော်လေးနည်း။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ရန်နိုင်ရန်အတွက်အောင်မြင်စွာအင်္ဂ၊သင်ဂရုစိုက်ရပါမည်သင့်ရဲ့ဖဲချပ်ပုံ၊အဖြစ်ကပြီးပြည့်စုံသောအသိပညာအနည်းဥပဒေများတက္ကဆက်ပြည်နယ်အကိုင် ဖဲချပ်။ ဒီမှာအဘယ်သို့အသုံးပြုသူများကိုရှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်အများဆုံးမကြာခဏ:ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေအဖြစ်တိကျစွာအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ!
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖဲချပ်လပ်တစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်သောအရိုသေလေးစားမှုနှင့်ချစ်၏သန်းပေါင်းများစွာကမ္ဘာအဝှမ်းကစားသမားတွေ။ ရုရှားကကိုဖန်တီးကိုဤဂိမ်း၏အမော်ကုမ္ပဏီအရူးပန်၊ဒီဂိမ်းဟာအခုကစားအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ နောက်တဖန်အ၊သင်သည်ယုံကြည်လျှင်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက် ၂၀၁၄ ဂိမ်းအကြီးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားတက်ဘလက်နဲ့ဖုန်းများအားဖြင့်ပိုပြီးထက် ၃၈ သန်းကစားသမား၊ထိုသို့သိမ်းပိုက်ရန်ထက် ၆၃ အျဖဲချပ်အပိုင်းအတွက်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ နှင့်ဤသည်အဘယ်သူမျှမတိုက်သောကြောင့်၊အားကစားမှာကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖဲချပ်လပ်၊သင်လိုအပ်ငွေသွင်းဖို့ပိုက်ဆံ။ သင်ကဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်လိုအပ်ချစ်ပ်များအတွက်ဂိမ်းကြိုက်ကြောင်း၊ဆပ်ဖို့မလိုဘဲသူတို့အဘို့။ အဆုံးသတ်မှာ၊ထိုသို့ထွက်လှည့်သောကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖဲချပ်လပ်နေသည်အလွန်ကြီးစွာသောဖဲဆပ်ကပ်နိုင်မည့်အလေ့အကျင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်တိုက်ပွဲများနှင့်အတူကစားသမားများအားလုံးကမ္ဘာအနှံ့!
၁ ဖဲချပ်အွန်လိုင်းကစားများအတွက်အခမဲ့များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ ရီးရဲလ်အွန်လိုင်းဖဲချပ်
ဖဲချပ်တစ်ကဒ်ဂိမ်းစာသားရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့တစ်ချက်ချင်းလက်ငင်းအတွက်။ ထို့အပြင်၊အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီလောင်းကစားဂိမ်းဒါကြောင့်မြင့်မားသည်ကစားမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့် တိုက်၏။ ခေတ်သစ်အနက္တစ္ဦးကိုခွင့်ပြုယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဖဲချပ်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအပေါ်ကျောက်ပြားကို၊နေစဉ်အဆိုပါဂိမ်းကိုကစားများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၊အရာထပ်ပြောသည်ပင်ပိုမိုတိုးဒီဖ်ာ္ေျ။ ငါတို့သည်လုံခြုံစိတ်ချစွာအကြောင်းပြောဖဲချပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်တူတန်းတူအပေါ်အခြားလောင်းကစားဂိမ်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်း၏လူကြိုက်များ၏၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည် နှင့်အတူ၊အစဉ်အလာအားကစားအလောင်းအစကဆက်ပြောသည်နိုင်စွမ်းဖဲချပ်ကစားရန်။ နိုင်ငံတကာ ၁ ကမ်းလှမ်း၊ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှု၊သိတဲ့အချက်အဖြစ်ဝယ်လိုအားအတွက်။ ထို့အပြင်၊၁ ဖဲချပ်အားဖြင့်ကစားနိုင်ပါတယ်ဆိုကစားသမားထံမှမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊နှင့်ဂိမ်းအလိုလိုအမလိုအပ်ပါဘူးမည်သည့်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူ။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ကံမကောင်းစွာ၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖဲချပ်ကစားရန်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်။ ပင်စောင့်ကြည့်ရုံကျောက်ပြားနှင့်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဂိမ်းအဖြစ်ဧည့်သည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်။ သို့သော်၊မကြောက်ပါနဲ့၊ဒီနေရာမှာအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ရိုးရိုးတတ်နိုင်သမျှ။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်မှာ ၁ ကိုနှိပ်ပါ၊ကနေတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်၊ အသုံးပြုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒါဟာနေဆဲဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အများဆုံးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်း။ အရေးကြီး! သင်၏စစ်မှန်သောအသေးစိတ်(နာမည်၊ပြီးခဲ့သည့်နာမည်က၊လူနေအိမ်လိပ်စာ၊ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊စသည်တို့ကို။) ရန်နိုင်မည်နိုင်ရန်အတွက်ဆုတ်ခွာဖို့ငွေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ စိတ်ကြိုက်သင့်ပရိုဖိုင်းအဖြစ်သင်မထိုက်မတန်မြင်သည်။ တက်ပြင်ဆင်ခြင်းအရိုလည်းပါဝင်သည်တစ်ဦးရွေးချယ်သောနံပါတ်များ၊အဖုံဖုံပြသ၊သင်ဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်အသံဂိမ်းအတွက်၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ဤအရိုးရှင်းဆုံးအဆင့်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်သင့်သည်နောက်တော်သို့လိုက်ဒါကြောင့်သူတို့မကျင့်ကိုအာရုံထဲကနေသင်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအနာဂတ်မှာ။ ရန်ပုံငွေထည့်သင့်အကောင့်မှ။ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်အလုပ်အသိုက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကို။ ဤသူနှစ်ဦးစလုံးအဇာသို့မဟုတ်ကဒ်များ၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊နည်းလမ်းများကို။ပိုက်ဆံ။ငွေနှင့်များစွာသောအခြားငွေပေးချေမှုစနစ်။ သင်နှိပ်တဲ့အခါ"အထိပ်ဖွင့်"ကြယ်သီး၊သင်မြင်ရလိမ့်မည်တစ်ခုလုံးကိုစာရင်း၏ရရှိနိုင်သိုက်ကရွေးချယ်စရာ။ အကိုသွားပါ"ဖဲ"အပိုင်း။ အဓိကအစာမျက်နှာပေါ်တွင်အ ၁ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍ:"လိုင်း"၊"အသက်ရှင်သောဂိမ်းများ"၊"နို"နှင့်အခြားသူများအကြား၊"ဖဲ"။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိသင်စတင်နိုင်ပါသည်၊သင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ တစ်ကဒ်ဂိမ်း။ ၁ ဖဲချပ်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မွတ္ထားခွင့်ပြုထားသောမည်သည့်ကစားသမားကိုအလျင်အမြန်ထွက်တွက်ဆဖို့ဘယ်လိုရွေးချယ်အမှန်ဇယား၊ဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဂိမ်းအတွက်၊စသည်တို့ကို။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ချက်ချင်းရွေးချယ်ပါလိမ့္မည္။ပြိုင်ပွဲ:(စုံ-စားပွဲဖဲပြိုင်ပွဲအရာတခုနီးပါးအဆုံးမဲ့အရေအတွက်ကစားသမားတွေအယူအစိတ်အပိုင်း)နှင့်ထိုင် သြား(ပြိုင်ပွဲအဘယ်သူစတင်အချိန်မဆုံးဖြတ်ကြိုတင်မဲအတွက်၊ကန့်သတ်အရေအတွက်သင်တန်းသားများကို)။ သင့်ပရိုဖိုင်း။ ဒီထိုးစမ်းသပ်မှု(နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်အိုးစိန်ခေါ်မှု)၊အရာဖော်ပြထားတဲ့အသေးစိတ်အတွက်အကြာတွင်အတွက်ဆောင်းပါးလည်းရွေးချယ်သင့်စက်ဝိုင်း(စိတ်ဝင်စားစရာဓာတ်ပုံတွေသာရုပ်တုဆင်းတုနှင့်အတူလူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ္ထဲမွာ၊ဒါပေမယ့်လည်းတိရစ္ဆာန်၊အားလုံးအမြိုးမြိုးဟီး၊စသည်တို့ကို။)၊ သမိုင်းမြင်၏။ ၁ ကမ်းလှမ်းကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းဖဲချပ်ရွေးချယ်မှုများ:ကိုင် နဲ့ ။ ဖဲကစားသမားများ၊အဘယ်သူသည်ရှည်လျားနှင့်အနက်အတွက်အထူးပြုဤကဒ်ဂိမ်း၊နားလည်ဖို့အားလုံးအကြားခြားနားချက်ဤမျိုးပေါင်းနှင့်ရွေးချယ်သည့်ရွေးချယ်စရာ သူတို့တွေဟာပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့အကြိုက်ခြင်းငှါ၊သို့မဟုတ်အကြောင်းတည်းတတ်၏ပိုပြီးငွေရှာ။ ပထမတစ်ချက်မှာ၊ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးမသတိထားမိ၏လူကြိုက်များမှုအ ၁ ဖဲချပ်အဖြစ်၊အများဆုံးကိစ္စများတွင် ၈-၁၀ စားပွဲအသားသိမ်းပိုက်အားဖြင့်စစ်မှန်သောကစားသမား။ ဖဲချပ်ကစားရန်ပေါ်အဘီ ၁၊သင်သိရန်လိုအပ်သည်စည်းမျဉ်း၏ဒီကဒ်ဂိမ်း။ ရှိပါတယ် ၂ ဂိမ်းရွေးချယ်မှုများအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:ကိုင် '(တက္ကဆက်ပြည်နယ်)။ ဒါကအသင့်အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူဤအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖဲချပ်ဂိမ်းအဘို့အ။ လမ်းဖြင့်၊လူအချို့အဘယ်ကြောင့်မေး ၁ ရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောငယ်လေးတစ်အမျိုးမျိုး၊အဘယ်ကြောင့်မရှိရဲ့သကင္-လိုသို့မဟုတ်ဆွဲ။ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေအတွက်တည်ရှိသည်ကြောင်းနားလည် ၁ တော်လေးမကြာသေးမီကစတင်ခဲ့တဲ့ကဒ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်သင့်အနေနဲ့တိုးမြှင့်အရေအတွက်ဖဲချပ်မျိုးကွဲအနီးအနာဂတ်အမည်ဆွဲဆောင်များ၏အာရုံကိုပင်ပို။ ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့၏အင်္ဂါအကိုင် သင်သိသင့်? ကိုင် ၅-ကဒ်ဂိမ်း။ ကြောင်း၊အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ပေး ၅ ပွင့်လင်း။ အစပိုင်းတွင် ၃ ကဒ်၊ထိုအခါ၊ပြီးတော့နောက်တစ်။ ကစားနေဆက်ပြီးမှအတွက်၊အဆိုပါကစားသမားထားရမည်အတူတူပင်ငွေပမာဏအတွက်အိုးအဖြစ်အခြားကစားသမားကိုသူ၌ကျန်ကြွင်းသောအလက်များ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့များမှာ၊အဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အကိုင် စဉ်းစားသည်လွယ်ကူပေမယ့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဂိမ်း။၏ ထို့အပြင်၊အများအပြားမဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းဗျူဟာအသုံးပွုနိုငျသောအခါကစားကိုင် '။ ဒီမှာအဓိကအင်္ဂါရပ်များအ ဂိမ်း:ကစားသမားတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသော ၄ မျက်နှာ-ဆင်းကဒ်များ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါင်းစပ်ဆဲပါဝင်ပါသည် ၅ ကတ်များကို(၂ နှင့် ၃ တွင်ပွင့်လင်းအထွေထွေရှိပါတယ်၊အမျိုးမျိုးသောမျိုးကွဲများနှစ်ဦးစလုံးအကိုင် နဲ့ ၊ဒါပေမယ့်သာ ၂ ရွေးချယ်စရာများကမ်းလှမ်းအ ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အထိ။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ။ဒီည့္ခခွင့်ပြုကစားရန်တစ်လိုလားသူများကဲ့သို့။တစ်ဦးအတွေ့အကြုံဖဲကစားသမားကိုကစားနိုင်ပါတယ်မျိုးစုံစားပွဲမှာတစ်ချိန်ကကယ်ဖို့အချိန်နှင့်အနိုင်ရရှိအများကြီးပိုပြီးငွေရှာ။ သို့သော်၊သင်ချက်ချင်းသတိပေးလူတိုင်း:ဒီည့္ခဘို့အသင့်လျော်သည်မှန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းမ ဖဲကစားသမားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆောင်ရွက်ရန်၊အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းအတွက်ဒီပုံစံ၊ဒီနေရာမှာသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်စာသားအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်ကြည့်ရှုအပေါ်။ အသံမှပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံ၏။ လူအတော်များများလည်းအတွက်စိတ်ဝင်စားအဆိုပါဂိမ်းခ််ိန္ညႇ်ိခ်က္:အော်တိုပြန်လည်အရှုံးသွားလက်၊အလောင်းအစားချိန်ညှိချက်များ၊စသည်တို့ကို။ ဤအဂၤါဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြုတစ်ခုန့်အသတ်ငွေပမာဏအချိန်ကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ကိုအခြားဖဲကစားသမားပြုမူမှာအတုစားပွဲပေါ်မှာ(အဘယ်သို့နည်းဗျူဟာကိုသုံးပြီး၊ဘယ်လိုမကြာခဏသူတို့အင်္ဂ၊စသည်တို့ကို။)။ ဤသည်အဆင်ပြေသောလိမ့်မည်တန်ဖိုးအားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေ။ ပြိုင်ပွဲဒါန်းရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ပါကကစားသမားညျ့အားလုံးလိုအပ်သောအခြေအနေသတ်မှတ်ထားသောဖော်ပြချက်ထဲတွင်၊ထို့နောက်သူကအခွင့်အလမ်းကိုကစားရန်ကြီးမားတဲ့-ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဆုချီးမြှင့်။ အဆိုပါဂိမ်းဖြစ်လာတောင်မှပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တက်ကြွ။ စတင်မီ၊ကအကြံပြုထားသည်ဂရုတစိုက်လေ့လာမှုအားလုံးအထက်ပါအင်္ဂါရပ်။ ဤသည်သာအလမ်းအဖြဲဂိမ်းချောချောမွေ့မွေ့နှင့် သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဘို့၊နှင့်ပျော်မွေ့၏အလွန်ဖြစ်စဉ်ကိုကဒ်ဖ်ာ္ေျ။ ၏သင်တန်း၊သင်အတွေ့အကြုံ သင်ဂိမ်းအွန်လိုင်းဖဲချပ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၊ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သင်ချက်ချင်းကိုဝင်ငွေနိုင်ပြီးရုတ်၊အဘယ်သူသိတယ်၊သူတို့ပြောသကဲ့သို့၊အရင်ကဆိုရင်ကံကောင်းများမှာ။ သို့သော်၊သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့အနိုင်ရရှိနှင့်အမြတ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘီ ၁ ပါဘူးတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုသေချာစေရန်အဆိုပါကစားသမားရဲ့အချိန်မှာစားပွဲပေါ်အသာသက်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးဝင်သော၊အနာဂတ်၌သင်ရနိုင်ကောင်းသောအအနိုင်ရရှိ။ ဘာ ၁ ဖဲစိန်ခေါ်မှုများဆိုလိုတာလဲ? အခြားစကားများတွင်၊ဤပြိုင်ပွဲကြီးကမိမိတို့အအတိအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူကိုရောက်ရှိဖို့လိုအပ်အချို့တန္ဖိုးနည္း။ ဥပမာများထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှု:နေ့စဉ်ဖၚျပသည္။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်၊ပတ်ပတ်လည်သင်ရမယ်ကစား ၁၀၀ျခညွပ္ဖိနပ္မှာအကန့်အသတ်$၀။၀၅ $၀။၁ သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား။ ဒီလိုအလျှောက်ဖွင့်လှစ်သုံးစွဲဖို့နေ့စဉ်အိုး$၁၀၀ ပြိုင်ပွဲ။ တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်၊ပိုတောင်စိတ်ဝင်စားစရာကမ်းလှမ်းချက်-အပတ်စဉ်ဖၚျပသည္။ ၅၀၀ ခညွပ္ဖိနပ္တစ်ချိန်တည်းမှာကန့်သတ်အဖြစ်အများအတွက်နေ့စဉ်အိုး၊နှင့်ကစားသမားရဖို့လက်လှမ်း$၅၀၀ ပြိုင်ပွဲ။ ဤသည်အလွန်အလေးအနက်အများအတွက်ပူဇော် သောသူတို့အကစားသမားတွေရှိပြီးသားအတွေ့အကြုံရှိသည်၊ကစားလုံလောက်တဲ့ကြိမ်၊နှင့်ယခုကြိုးစားသူတို့ရဲ့လက်မှာကြီးစားပြိုင်ပွဲ။ သင်သည်လည်းအကြောင်းပိုထွက်ရှာမည်အသီးအသီးပြိုင်ပွဲကိုဒီနေရာမှာအပေါ်။ သတ်မှတ်အစ၏ေပြိုင်ပွဲ၊စားသမားအရေအတွက်ကို၊ဆုကြေးငွေ၊မျက်စိကန်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ မူအရ၊ဒါကြောင့်မခက်ခဲသည်နားလည်ရန်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုညာဘက်အပေါ်အစက်အပြောက်။ တချို့ကစားသမားတွေကြုံတွေ့နှင့်အတူတစ်ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှု:အရာပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ- သို့မဟုတ် (ထိုင်နှင့်သွား)။ ၏သင်တန်း၊အသီးအသီးဖဲကစားသမားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းသူစဉ်းစားပြီးပိုအောင်မြင်အောင်နှင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်။ တွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမားမကြာခဏရွေးချယ် ရှိပါတယ်ကြောင့်အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကစားရန်အွန်လိုင်းဖဲချပ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံမရှိရင်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်။ အချိန်ပို၊သူတို့ပြောင်းရွှေ့ သိုလှောကျောက်ပြား။ အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်ဝင်ငွေတွက်စစ်မှန်သောငွေကြေး ၁ ဖဲ? သင်တန်း၏၊ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ဖို့အရာအားလုံးအမှတ်တဦးတည်းဆောင်းပါးထဲမှာ၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအဓိကအကြံပြုချက်များသင်ကူညီလိမ့်မည်လုပ်အပေါ်ပိုက်ဆံဖဲချပ်:တစ်ကဒ်ဂိမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ခွင့်ပြု၊သင်အပြည့်အဝလိုလောင်းကစားရုံအတွက်လေထုဟူသောအချက်ကိုပေမယ့်၊အဆိုပါဂိမ်းမှာကစားနေပါတယ်သွင်ဇယားအွန်လိုင်းကမ္ဘာထဲမှာ။ နေ့တိုင်းအရေအတွက်ဖဲချပ်ကစားသမားအေန ၁ လာင္းကုမ္ပဏီအဆကြီးထွားလာသည်၊ဒါကြောင့်သင်လည်းအတွက်စိတ်ဝင်စားအတူဂိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၊နှင့်အမှန်တကယ်သက်သေပြရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုဖဲချပ်ကစားရန်။ အားလုံးကြွင်းသောအရာစီစဉ်ပေးထားကြောင်းဒါကြောင့်အသီးအသီးကစားသမားမည်အလိုလိုနားလည်ရန်မည်သို့တစ်ဦးရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ထား၊စားပွဲချိတ်ဆက်ရန်၊မည်သို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှဂိမ်းအတွက်၊စသည်တို့ကို။အချို့အတွက်၊ဒီရုံအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာညဦးဆိုရင်၊နှင့်သင်ကံကောင်းကြသည်၊ထို့နောက်အချို့ပိုက်ဆံအနိုင်ရ။ အဘို့နှင့်အချို့သော၊ဒီဟာနီးပါးအဓိကနည်းလမ်းငွေရှာဖို့။ ထို့ကြောင့်၊ဒါဟာဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်သောပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှ၊အဘယျသို့အကန့်သတ်နှင့်အတူကစားရန်၊နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံဖို့ကဒ်ဖ်ာ္ေျ။ ၁၊အလှည့်အတွက်၊အရာခပ်သိမ်းကိုပြုလိမ့်မည်ကိုသေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှအချိန်ကုန်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအဖြစ်အသုံးဝင်သောအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ သာယာသောအတွေ့အကြုံအတွက်!အသစ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်စတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ချက်ချင်းဖြစ်လာအဓိကတဘီ. ၁။ ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ၁ အွန်လိုင်းကာစီနို၊သင်တွေ့လိမ့်မည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ။ ဤသည်၏စုစုပေါင်းက ၂၀၀၀ အားကစားပြိုင်ပွဲ။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ်များမှာရှာ။ လူကြိုက်အများဆုံးပေါက်စက်များကျော်အတိတ် ၂၄ နာရီမီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်နှင့်အတူစကားလုံးပူ။ သုံးစွဲဖို့တရားဝင် ၁ အွန်လိုင်းကာစီနိုကစားခြင်းများအတွက်အမှန်တကယ်ငွေနှင့်အတူမြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖွင့်လှစ်သင်နှိပ်တဲ့အခါအပေါ်လူကြိုက်။ အဆင်ပြေတဲ့စြပ္ေဂိမ်းသည္ကိုထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ၁၂၊ နှင့် ကစား၊၊စသည်တို့ကို။၊ ထောက်ပံ့ပေးလျင်မြန်စွာအညွှန်း။ အသုံးပြုရှာဖွေရေး၏ထိပ်မှာစာမျက်နှာရှာတွေ့မှလူကြိုက်အများဆုံးလောင်းကစားရုံကဒ္ထ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံအထီရေးသားအွန်လိုင်းအနီးကွန်၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလုပ္လုပ္သည္။ ထီတိုးပွါးကြောင့်အနှုန်း၏။ ထီဂၤါပေးအယူပိုင်းမှာ ၁ လောင်းကစားရုံဂိမ်းများအတွက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူတစ်တိုးတက်သောဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်။ အဆင်ပြေတဲ့မိုဘိုင်းလိုင်းကနိုင်မှသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်း။ အအက္ပ္ကိုတပ္ဆင္ထားသင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် မႈမ်ဳိးကနေတဆင့်အက္ပ္။ မပိုမှီခိုအပေါ်ဖြန့်ချိ။ လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်၏အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အမည်:ဒါဟာပြီးပြည့်စုံစာရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအအက္ပ္၏။နိုင်ရန်အတွက်လွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများဒေါင်းလုဒ်အ. ၁ လာင္းအက္ပ္ကို၊သင့်တပ်ဆင်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့စက်ကိရိယာ၊နှင့်ဤဆောင်းပါးအမည်ကိုသင်ပြောပြအတိအကျဘယ်လိုဒီလိုလုပ်ဖို့၊တစ်လျှောက်နှင့်အတူအဖြေဘုံမေးခွန်းတွေက။.
ပထမဦးဆုံးသင်လိုအပ်နေရာအလောင်းဟုခေါ်သည်၊အ ။ နောက်တစ်ခု၊အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ပေးကိုယ်တော်တိုင်အဆိုပါကစားသမားနှစ်ဦးအတွက်ကဒ်အပိတ်အနေအထားနှင့်လည်းလိုက်သုံးကတ်များအတွက်ပွင့်လင်းအနေအထားအတွက်၏အလယ်ဗဟို။ ပါကကစားသမားဆက်လက်ကစားရန်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုထည့်လေ့မရှိပိုပြီးနှစ်ခုကတ်များအတွက်၏အလယ်ဗဟိုဇယား၊အရာပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သူများထုတ်ဖေါ်သူတို့ရဲ့ကတ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခုနစ်ကဒ်များနှစ်ခုအတွက်လက်ငါး၏ဗဟိုအတွက်ဇယား"အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရှိပါတယ်ဂိမ်း"အခြေအနေကြေညာ၊ဒုတိယအလောင်းအစားမှပြန်လာကစားသမားနှင့်အ လောင်းပေးရသည်ထိုအဆိုအ ။
အကြောင်းထွက်ရှာလက်ရှိရာထူးနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရရှိနိုင်ကစားသမား၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖဲချပ်။ ဖဲဘယ်နေရာမှာမဆို၊အချိန်မရွေး-ကစားမည်သည့်ဂိမ်းတဆင့် အက္ပ္ကိုတိုက်ရိုက် သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်! စောင့်ကြည့်ရေးအကြိုက်ဆုံးဖဲချပ်ပြသများအတွက်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အ တဆင့္လက္ပတ္နာရီရုပ်သံရှိုး၊အင်တာဗျူးများ၊နှင့်အခြားဗီဒီယို။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အခမဲ့ဂိမ်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲ-အယူအစိတ်အပိုင်းအတွက်နေ့စဉ်အခမဲ့ပြိုင်ပွဲ၊ထိုင်နှင့်သွားနှင့်ပုံမှန်ဂိမ်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောအဖဲပုံစံများနှင့်ဖတ္ခ်က္ေ။ ကြည့်ယူငါတို့၏မဟာဗျူဟာအပိုင်းအနေဖြင့်အခြေခံအကျဆုံးအကြံပြုချက်များကိုသင်ကြားပို့ချဗီဒီယိုများ၊ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်။ အချို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆုနှင့်ဆုလာဘ်၏ဤလောကအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်များမှာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ဤတွင်အထူးအကမ်းလှမ်းမှုများစာမျက်နှာ။ ကိုင္မ်ား၏အကြီးဆုံးရွေးချယ်ရေးအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲများအတွက်အခမဲ့ချစ်ပ်။ ကိုင် '၊ နှင့်အခြားအမျိုးပေါင်း-သင်အမြဲအတွေ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲ။ အသီးအသီးကစားသမားဝင်ငွေနိုင်ပါအခမဲ့ဆုလာဘ်အပါအဝင်၊လက်မှတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အဓိကအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲကြီး။ ကိုပယ်ပေးသည်ပိုပြီးဆုလာဘ်အသီးအခြားမည်သည့်ထက်သာဖဲချပ်။ သင်ရနိုင်လုံးဝအခမဲ့နှင့်အဖမ်ားျရှည် ကစားပျော်စရာရှိသည်ဖဲချပ်ပေါ် ။ ပေါ်မှာကစား နှင့်ချွတ်ပြသသင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ သည်အားဖြင့်ကစားကအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေအပေါ်ဂြိုဟ်၊ပြီးသူတို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘယ်လောက်သင်ပြောပြရန်ဖြစ်လာမှတစ်အိမ်ဖဲချပ်။
ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်း၊ကျွန်တော်ဖုံးလွှမ်း၏မှတ်ပုံတင်များအတွက်ဖဲချပ်ကိုကြယ်ဖို့ဘယ်လိုဒေါင်းလုပ် ဆော့ဖ်ဝဲကို၊အောင်တစ်သိုက်ဖဲချပ်ပေါ်ကြယ်ပွ၊လက်ခံရရှိပထမဦးဆုံးသိုက်ကအပိုဆုကြေးနှင့်အ အပိုဆု။ ဒုတိယအပိုင်း၌၊ကျနော်တို့အနီးကပ်ကြည့်ရှုယူမှာလိုင်းဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဖဲချပ်ခန်းရာထူးကခွင့်ပြုမှစတင်ကစားသည်အမှန်တကယ်ငွေဖဲချပ်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင်သင့်အခြေအနေ။ ဖဲကြယ်လိုင်းအဝေးအားဖြင့်အများဆုံးအဆင်ပြေပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်အပေါင်းတို့၏စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရှိပါတယ်ဗားရှင်းပြတင်းပေါက်များအဘို့နှင့်မက်ကြည့်သောအကြောင်းအတူညီနှင့်အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ဧပြီနှစ်ခုအဓိကအသုံးပြုသည်။ ပထမအထိပ်နူး၊ဘယ်မှာသင်နိုင်အောင်အမျိုးမျိုးသောအပြီးရရန်အရေးကြီးအချက်အလက်။ အချက်အလက်။ နှင့်ဂိမ်းရွေးချယ်ရေးမီနူးကိုရွေးဖို့ခွင့်ပြုလိုချင်သောအမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်-ကိုင် '၊ နှင့်အခြားသူများအဖြစ်၊အဖြစ်သွားကြဖို့အတွက်ကစားပြိုင်ပွဲများ၊ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးကလပ်အတွက်'အိမ်ဂိမ်းများ'။ အတူတူ-သင်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်၊နှင့်အတူကစားစုႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ်လိုမှဖန်တီးနှင့်အတည်ပြုအကောင့်တစ်ခုကြီးဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ယခင်ဆောင်းပါး။ အခုအတွက်တော့၊ကျနော်တို့အကြောင်းသတိပြုပါဖဲချပ်ကိုကြယ်ဧည့်သည်ရရှိနိုင်သောအမျိုးမျိုးအတွက်ဘာသာစကားအပါအဝင်၊ရုရှား။ ရွေးဖို့ဘာသာစကားတစ်ခုရှိပါတယ်၊အထူးဆောင်းပါးတပုဒ်အတွက်ထိပ်တန်းနူး'ဘာသာစကား'။ ဒီနေရာတွင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအချိန်ဇုန်၊အလွန်အသုံးဝင်နှင့်အဆင်ပြေသောခွင့်ပြုမဆက်မပြတ် မစ၏။ 'ဧည့်သတင်းအချက်ဖော်ပြရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာ'ရွေးချယ်စရာခွင့်ပြုဖို့အပိတ်အချို့အမျိုးအစားများကြော်ငြာခြင်း၊အကောင့်ကိုအပြပြိုင်ပွဲနှင့်ဂိမ်းသည္အရာဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်ကစားသာအားကစားသမားမှအချို့သောနိုင်ငံများသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အဆိုပါပြိုင်ပွဲရရှိနိုင်ကနေကစားသမားတွေအဘို့အ၊နှင့်လုံးဝလိုအပ်ကနေကစားသမားတွေအဘို့အရုရှားနိုင်ငံမှမြင်ရကတည်းက၊သူတို့နေဆဲမတတ်နိုင်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရှိပါတယ်နှင့်ကစားသည်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအတွက် ဖဲချပ်။ သင်သည်လည်းပိတ်ကိုကျောက်ပြားကိုအဘို့နှင့်အတူကစားခြင်းခြွင်းချက်ချစ်ပ်၊အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမလိုအပ်လျှင်ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေါ်မှာကစားရန် များအတွက်? သင်အလွန်ကောင်းစွာလုပ္ရန္အသုံးျငး်စားပွဲ၏။ အရေးကြီးဆုံးအရာများမှာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့စွမ်းရည်လေးရောင်စသည်တို့နှင့်ဖောင့်အရွယ်အပေါ်အပီဗ်ာ။ ရှိပါတယ်ချိန်ညှိများအတွက်အစာရှောင်ခြင်းမွန္ဘီလူးဖဲ၊အဓိကအားဖြင့်ဆက်စပ်။ လည်းရှိပါတယ်၊အသေးစိတ်ချိန်ညှိဘို့အဘယ်သို့ပြုရမည်နှင့်အတူစွန့်ပစ်။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ကြောင်းမပြဘူးဘာမှမှမည်သူမဆို(ပဳျပင္ၿပုံမှန်အားဖြင့်)။ 'အကြိုက်ဆုံးနေရာကအသုံးဝင်သည်နှင့်အဆင်ပြေရွေးချယ်ဖို့နေရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုင်လျက်အမျိုးမျိုးအပေါ်ကျောက်ပြားကို။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်လုပ်နိုင်သည်သင့်ရဲ့တည်နေရာကိုပြောင်းလဲဂိမ်းကာလအတွင်း၊ဒါပေမဲ့ဒီအများကြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အလောင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်လျင်မြန်စွာခလုတ်ကိုသင်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်အဘို့အလွန်ပါးလွှာသော၊အထူးမီနူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်နှင့်စိတ်ကြိုက်"ပူသော့"အားဖြင့်တာဝန်ပေးနီးပါးမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆိုပေါင်းစပ်။ အရှိန်မြှင့်ဖို့စတင်ဂိမ်း၊သင်ပြုလုပ်နိုင်သည် အဆိုပါ၏ပြင်း နှင့် ဖို့ခွင့်ပြုသောထပ်တလဲလဲလုပ်ဆောင်အလားတူစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းဂိမ်း။ သင်ဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်သံနှင့်အပြောင်းအလဲကိုမူလအသံအချက်ပြမှုရန်တာဝန်ပေးအပ်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များ။ လည်းရှိပါတယ်အချို့သောအခြားချိန်ညှိနိုင်သည်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သိမ်းဆည်း၊နှင့်အဘယ်မှာကယ်ဖို့သင်၏လက်ကိုသမိုင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲရလဒ်များ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့၊ဒီနေရာမှာသင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်သမိုင်း၏လက်များနှင့်သမိုင်းပြိုင်ပွဲကစား။ တောင်းဆိုထားသောဒေတာစေလွှတ်လိမ့်မည်၊အီးမေးလ်လိပ်စာသတ်မှတ်ကာလအတွင်း။ အတူတူသွားအတွက်ဂိမ်းစာရင်းအင်း၊ဖြစ်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ဖို့အီးမေးလ်။ ဒါ့အပြင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမေးမြန်း၊လူကြိုက်အများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်'ရှာတွေ့ပြိုင်ပွဲ'နဲ့'တွေ့ရကစားသမား'။ အရေအတွက်နှင့်အမျိုးမျိုး၏ပြိုင်ပွဲကစားသောအခါအတွက်အိမ်မှာပိုက်ဆံဖဲချပ်ကိုကြယ်ကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်ကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်တိကျတဲ့ပြိုင်ပွဲ၊သင်သိလျှင်မူကားပြိုင်ပွဲအပ၊အရာအားလုံးကိုအလွန်ရိုးရှင်းသော။ ကိုယ့်အလုပ်အတွက်သင့်လျော်သော။ ပိုင်ရှင်များအတွက်အအန္းနှင့်ဖုန္းရှိပါတယ်၊ မိုဘိုင်းဗားရှင်းများ။ တစ်ပိုအသေးစိတ်ငံု၎င်း၏အင်္ဂါဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျ: ပထမဆုံးထည့်သွင်းဖို့စွမ်းရည်ကိုအားကစားအမြန်ဖဲချပ်မှာ၎င်း၏။ ဒီဟုခေါ်သည်မွန္ဘီလူးနှင့်သက်ဆိုင်နူးပစ္စည်းအတွက်ရရှိနိုင်သောဧည့်ခန်း။ သင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဘယ်အနှင့်မည်သို့အစာရှောင်ဖဲကျင့်ပါသောသူတို့အဘို့ခန့်ထားပြီငွေသွင်း၊မဟုတ်သေချာပေါက်ပထမဦးဆုံးတ၊ဖဲကြယ်စေသည်တစ်ဦးအံ့ဖွယ်ရက်ရက်ရောရောပေးကမ်း။ အ ၃၁ ရက်အပြီးနောက်အသိုက်အရက်စွဲခြင်း၊ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်လေး တစ်နေ့လျှင်နှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်$၁၊၀၀၀။ စုစုပေါင်း ၁၂၄ ထိုကဲ့သို့သော ရရှိနိုင်ဖို့အလက္မွတ္ကို၊အရာထက်ပို$၁၀၀၊၀၀၀ အတွက်ဆု! ဤကမ်းလှမ်းချက်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်သာ။ သင်လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေမည်သည့်အရေအသိုက်နှင့်ဆက်လက်ကစားရန်ဤ လစဉ်လတိုင်း။ ထို့ကြောင့်၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံမရှိဘဲနီးပါးမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်၊သင်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတစ်သိုက်အတွက်ဂိမ်းမှာအားလုံး၊သိုက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဘို့ကစားအတွက်ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူအလွန်ကြီးမားသောဆု။ သာ ရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအရေအတွက်၊ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသည့်အာမခံအဆုအတွက်ပြိုင်ပွဲ။ ၏အကျော်ကြားဆုံးအာမခံအဖွဲ့တွေဖြစ်နိုင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအပတ်တိုင်းအပေါ်တနင်္ဂနွေမှာ ၂၃:၃၀ မော်စ။ သို့အရဤပြိုင်ပွဲ၊သင်အသိုက်အတိုက်ရိုက်ကစားပွဲ$၂၁၅။ သို့သော်သင်သည်လည်းအဘို့ကစားအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံများအတွက်အခမဲ့။ လက်မှတ်ဒီပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့နိုင်အတွက် ကျင်းပခဲ့၏အကြိုတွင်ပြိုင်ပွဲ။ အဆိုပါဝင်ပေါက်မှအ အတူပိတ်နှင့်စကားဝှက်တစ်ခု၊သင်မူကား၊အစဉ်အမြဲရှာဖွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အပိုင်းမှာယခင် စီးရီးမဖြစ်ဖွယ်ရှိအောင်မြင်ပြီးလူကြိုက်များ။ ဒီတော့နောက်ဆုံးစီးရီးအတွက်အဓိကအဖြစ်အပျက်များအတွက်အာမခံဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်ထဲမှာဖဲချပ်ကိုကြယ်၊ချန်ပီယံအွန်လိုင်းဖဲချပ်ကျင်းပကြသည်ထိုနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံး။ သို့သော်အများဆုံးအလားအလာလမ်းအတွက်အိမ်မှာပိုက်ဆံဖဲချပ်ကိုကြယ်အ -အနိမ့်လောင်းကြေးဖဲပြိုင်ပွဲ။ ဤပြိုင်ပွဲနှင့်အတူကြီးမားသောအာမခံဆုရေကန်၊ မှာစတင်$၀။၁၁၊ပျမ်းမျှအားဖြင့် သူတို့တက်အောင်$၅။ အဆိုပါဆုတွေကတော့အထင်ကြီး။ ဥပမာအားဖြင့်၊အဓိကအအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူမဝယ်အတွက်-$၂၂၊အဆိုပါအာမခံဆုဖြစ်ပါသည်$၁၊၀၀၀၊၀၀၀။ အဘို့အပထမနေရာ၊အနိုင်ရလက်ခံတွေ့ဆုံမှာအနည်းဆုံး$၁၅၀၊၀၀၀။ သင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်တပ်ဆင်လိုင်းဆော့ဗ်ဝဲရှိထားတဲ့အတွက်လက်မှတ်ရုံး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုဘယ်လိုနှင့်မှန်ကန်သောအဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်ပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ရောက်ရန်ဆုတွင်ကြယ်ကြောင့်အဆိုပါကစားသမားကြီးများအရေအတွက်ပြိုင်ပွဲ။ ကျန်ရစ်တွေအများကြီး-အတောင်ပံကစားသမားအဘယ်သူသည်မပါစေကစား၊ဖဲ၊ဒါပေမယ့်ထီ။ အကြီးဆုံးဖဲအာ္ပေကြေညာပေါ်၎င်း၏တရားဝင်ဘလော့ဂ်ကို၏နိဒါန်းသစ်တစ်ခုထိုင်ခုံၽြန္ုပ္၏အင်္ဂါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သာမန်ကစားသမားတွေမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။။။။ အထူးဖဲခရီးပွဲတော်အကြီးဆုံးဖြစ်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်အပျက်၎င်း၏မျိုးအစဉ်အဆက်ကျင်းပခဲ့ရာ့ဂ်၌။ ၎င်း၏စပွန်။။။အဆိုအရအချက်အလက်စီးဌာနမွပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏နိုင်ငံအ နယ်မြေ၊အ ဂိမ်းဇုန္၏ပထမဦးဆုံးအော်ပ။ ေတာင္း။။။ ဖဲမည္ေတရားဖဲကြန္ယက္။) တရားအဆုံးအဖဲကွန်ယက်အတွက်ကမ္ဘာနှင့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ပူးပေါင်းဖို့သူတို့ကို။။။
- ရဲ့ဖဲချပ်ညဥ့်အခါ ၂ တိုက်ရိုက်နောက်ဆက်တွဲယခင်အရစ်ကျ၊အဘယ်မှာရှိအသံုးျပဳသူမ်ားကစားကျော်ကြားဆန့်ကျင်သူရဲကောင်းများ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ။ အစပိုင်းတွင်၊တစ်ခုချင်းစီကစားသမားအညီထောက်ပံ့ရေးအချက်ကငွေကြေး၊အဆိုပါဂိမ်းအတွင်းသဘောကိုအောက်ပါအတိုင်းစည်းမျဉ်းများတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် နဲ့ ။ အဖြစ်အတွက်မူရင်း၊အောင်မြင်မှုများအတွက်ဖဲချပ်ညဥ့်အခါ ၂ သော့ဖွင့်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာနောက်ထပ်ဂိမ်း–ဤအချိန်ရိုက်သံ ၂။ ရှိပါတယ်ကိုလည်းအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေအပေါ်မူတည်ပလက်ဖောင်း–ရေနွေးငွေ့သုံးနိုင်သော့ဖွင့်ဝင်ရောက်ဖို့အပိုဆောင်းပစ္စည်းများအတွက် ၂။ တတ္ပါဂိမ်းများလူသိများ၎င်း၏ဂိမ်းအပေါ်တီဗီစီးရီး'အ'၊ကျွမ်းကျင်သောပြဇာတ်အပေါ်ခံစားချက်၏ကစားသမားနှင့်အတူနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲ၎င်း၏အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောစီမံကိန္း-ဖဲချပ်ညဥ့်အခါ ၂။ တစ်ချောင်းနှင့်အတူဒီဂိမ်းအဖြစ်ပုံမှန်အတိုင်း၊သင်သည်ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ပဲအတူမူရင်းဂိမ်း၊ဖဲချပ်ညဥ့်အခါ ၂ အင်္ဂါမှဇာတ်ကောင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းများ၊မလိုအပ်ဂိမ်းလုပ်ငန်းများ။ ဤသူရဲကောင်းအဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ရညစ်ယုတ်;ပြာ၊အဆွဲရမ်း ရှံကနေအ၊အ အရိုက်သံ ၂ ကစားစရာနှင့်အဟုတ္တယ္မဆမ်မှဆမ် မက်စ်စီမံကိန်း။ ထိုလုပ်ကြံမှုအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီး–ကျွန်တော်ကစားဖဲချပ်များနှင့်တွေအများကြီးရ။ ဤအချိန်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်-တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် သို့မဟုတ် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အလောင်းအစားမှတက်$၂၀၊၀၀၀။ သင္တန္းစနစ်ဖြစ်လာရန်အရင်ကဆိုရင်၊ဒါပေမယ့်မလျှော့လည်းအများကြီးဆုံးရှုံးလျှင်၊တစ်ကားနှင့်အသေးစားလွည္း၏ေရြးခ်ယ္ထားေဟာသလိမ့်မည်ချက်ချင်းတင်ပို့ရန်သင့်လိပ်စာ။ ဒါပေမယ့်အနိုင်ရ၊ပြီးပြည့်စုံတစ်အရေအခြေအနေရနိုင်လိမ့်မည်ကိုင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများနှင့်အစညျး၊အဖြစ်လုံးဝအပြောင်းအတွင်းပိုင်းအခန်းကိုအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်း၊ဇောက်ထိုးကမ္ဘာ၏သူရဲကောင်းများ၏ဖဲချပ်ညဥ့်အခါ ၂။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတွက်၊လူအများကိုပိုပြီးစွဲရန်၊မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှ။ ကျေးဇူးတင်ဖို့သူတို့ရဲ့အဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်ချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်း၊အလုပ္လုပ္ပါများမှာတဖြည်းဖြည်းအရှုံးမိမိတို့အဆီလျော်နှင့် ။ အတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်လုပ္ငန္း၊ဤခေတ်ရေရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်နှင့်အတူခေတ်၏အခြားဒေသများအသက်တာ၏။ ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ပေးခြင်းမှကြိုက်နှစ်သက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ သူတို့ကလည်းသူတို့ပစ္စည်းဖဲချပ်ကစားရန်အတွက်ငွေသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွား။ ဒါဟာအကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖဲဆော့ဝဲလ်များပါဝင်သောပစ္စည်းများအတွက်စုဆောင်းနှင့်ဖြာ၊အတွက်မရှိမဖြစ်အဖော်အဘို့အတိုင်းဖဲသွားသူတစ်ဦးကစားသမားကုသဂိမ်းဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်အမြတ်အစွန်းအောင်။ ကံမကောင်းစွာ၊အများဆုံးအပြည့်အဝ-စုံနှင့်အင်္ဂါရပ်-ကြွယ်ဝသောအင္းအစီအစဉ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်အကွန်ပျူတာ၊နှင့်သုံးစွဲသူများ၏မိုဘိုင်းအတွက်ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ခဲ့သည့်တရား။ ယနေ့တွင်၊သို့သော်၊သင်ပြီးသားနှင့်ပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းသည်စမတ်ဖုန်းများနှင့်အိုင်။ သဘာဝကျကျ၊သူတို့ကအဖြစ်အလုပ်လုပ်အဖြစ်လူသိများကိုင် မန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဖဲဖုန်းများ၊ဒါပေမဲ့သူတို့ကျိန်းသေသင်တို့အကျိုးဖြစ်ထွန်း။ မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေပေါ်အစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ချိုးဖောက်နေကြတယ်အားလုံးမှတ်တမ်းများ၏လူကြိုက်များအသုံးပြုသူများအကြားဒီရက်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊ဒီအဝယ်လိုအားကြောင့်စျေးနှုန်းသက်သာစျေးနှုန်း။ ထိုကဲ့သို့သောဝယ်လိုအားအဓမ္မဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူများမိတ်ဆက်ဖို့အသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပါအဝင်၊အဲဒီဆက်စပ်။ ကစားသမားတွေအတွက် အကူအညီအမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များဖြန့်ချိခဲ့ကြသောအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်နှစ်ခုလုံးအတွက်အိမ်မှာဖဲချပ်တိုက်ပွဲအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်။ တက်ရောက်သူများ၊သူတို့အဖြစ်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်များအပြားအုပ်စုများ:အချက်အလက်ဆိုင်ရာများ၊ကိရိယာများ၊ဂဏန်းများနှင့်သင်တန်းသူများ။ ကတည်းကရှိပြီးသားတွေအများကြီးထိုသို့သောအစီအစဉ်၊အသုံးပြုသူသင့်အပေါ်ဆုံးဖြတ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်သောအရာကိုသာရွေးချယ်ဘို့အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါေတြကိုအစီအစဉ်ခက်ခဲ၊ဒါပေမယ့်လူကြိုက်အများဆုံးသူများဖြစ်ကြမှတ်သားထိုက်။ ဤအစီအစဉ်များအတွက်ရည်ရွယ်သောသူကစားသမားတွေမရှိသေးပါကောင်းစွာ-ကိုလညျးတတျကြှမျးအတွက်ဖဲချပ်ပေါင်းစပ်:အမိန့်အများ၏တိုးမြှင့်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုး၊အဆိုပါကတ်များထည့်သွင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းမှု၊ထိုစာရင်းကိုင်အကိုက်ညီဆုံး။ ထို့အပြင်၊ဤလျှောက်လွှာကိုအဆိုပါကစားသမားနိုင်ပါလိမ့်မည်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '။ ကြီးမရှိအချက်အလက်၊ဒါပေမဲ့ဒါဟာအလုပ်စေခြင်းအသုံးဝင်သည်၊အကောင့်သို့ယူအပေါင်းတို့သည်အခြေခံအချက်များအကြောင်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမားသိရန်လိုအပ်သည်။ အလက္ပတ္နာဖဲချပ်၏လက်သည်အဖဲချပ်လိမ်လည်စာရွက်အစီအစဉ်၊အရာသင်ကြိုးစားနိုင်ပါတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်၊ကတည်းကအတူဘာသာပြန်ချက် ရှိပြဿနာများအတွက်ရုရှား။ အပြည့်အဝဗားရှင်းအစီအစဉ်၏၊အသံုးျပဳသူမ်ား၏ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်တစ်ဒေါ်လာ။ သို့သော်၊ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေ၊အဆိုပါကစားသမားကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏများ၏တန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်။ ဤအက္ပ္ကိုအမျိုး၏လမ်းညွှန်၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအဖဲချပ်အဖြစ်ကျင်းပ '၊ ဆွဲဖဲချပ်နှင့်အတူငါး။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၏အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ပေါင်းစပ်နှင့်ရှင်းပြချက်၏စည်းကမ်းချက်များကူညီပေးပါမည်ကစားသမားလျင်မြန်စွာမာစတာဖဲချပ်မှာအနိမ့်ဆုံးအခြေခံပညာအဆင့်။ အပြင်လွင်၊အစတစ်ဦးရှိပါတယ်အပိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအသုံးဝင်အကြံပြုချက်အပေါ်ဘယ်လိုကစားဖို့စတင်သင့်လက်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်တစ်ဦးမျက်စိကန်းရင္ဘတ္စ။ ဤအဂၤါခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ကစားသမားလက်လွတ်မညာဘက်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဂိမ်းအခါသူတို့ကမြှင့်တင်သူတို့မျက်စိကန်းနည်း။ အခမဲ့ဖဲချပ်ရင္ဘတ္စအစီအစဉ်အဒီဇိုင်းထိန်းချုပ်ဖို့အချိန်များ၏ပြုစုပျိုးထောင်အမျက်စိကန်းနှင့် ၊ဆို၊။ လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုများ၏ရရှိမှုအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ပုံစံအတွက်ပေးအချို့သောအင်းအချက်အလက်အစီအစဉ်များအတွက်ရေပန်းစားသည် ပရိသတ်စည်းရုံးခြင်းပြိုင်ပွဲ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်တူသောအရာတို့တွင်သင် ဖဲရင္ဘတ္စနှင့်ဖဲချပ်ရင္ဘတ္စလိုက်။ ဖဲအအန္းလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲရရှိနိုင်အဆိုပါကစားသမားကိုအသုံးပြုမိုဘိုင်း။ ဤအစီအစဉ်လုံးဝအခမဲ့နှင့်အလွန်စွဲသူများအကြားရေပန်းစားသည်။ အားဖြင့်ဝင်အားလုံးလိုအပ်သောအချက်၊ကစားသမားလျင်မြန်စွာစာရင်းဇယားများရကအိုးကွဲလွဲမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရတဲ့အချိန်မှာကတ်များနှင့်အမျှ။ တိုးမြှင့်အမြန်နှုန်းအချက်အလက်များ၏၊သင်ဖွင့်ထားသံထတံ့သော၊တန်ဖိုးအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအသုံးပြုသူအပြဇာတ်များအပြားဂိမ်းများတချိန်တည်းမှာပင်။ ဤအစီအစဉ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တရုတ်ဖဲချပ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊အချို့နှင့်မတူဘဲတူသော။ ကတည်းကဤအမျိုးအစားဖဲသင်ရေတွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆု၊အကေးရှင်းကိုအလွန်ပေးထားတယ်။ ဝင်ပြီးနောက်လိုအပ်သောဒေတာ၊အရေအသီးအသီးကစားသမားရဲ့အမှတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်သည်။ တနည်းများအတွက်ချက်မှတ်သားထားသင့်ပါသည်-သင်ကကစားနိုင်ပါတယ် သာအမျိုးအစားအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်။ လူကြိုက်များသော လက်ထောက်အစီအစဉ်အရေအတွက်၏အားသာချက်များကြောင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ၏ကျယ်ပြန့်။ ဒါဟာမသာကြလိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်တဲ့အလေးနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေ၊ဒါပေမယ့်လည်းမိတ်ဆက်ပေးတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အစာရင်းများ၏ပေါင်းစပ်နှင့်အခြေခံဂိမ်းဟာဗျူဟာ။ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်အဖဲလမ်းညွှန်နှင့်ဂဏန်းပေါင်းစက်၊အပြည့်အဝတွန်းပို့ခေါင်းစဉ်၏လက်ထောက်ဂိမ်းအတွက်။ ဤသည်အမျိုးဖဲချပ်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့်အတူနှစ်ဦးအဆင့်ဆင့်များအခက်အခဲ၊သောများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ဂိမ်းအခြေအနေ။ အသုံးပြုအစားသမားတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့ခန့်မှန်းအိုးရဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အထူးသဖြင့်အခြေအနေ။ ဤအစီအစဉ်ရှိတူညီသောပန်းတိုင်အဖြစ်ယခင်တဦးတည်း၊ဒါပေမယ့်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးအဆင့်သုံးဆင့်၏အခက်အခဲနှင့်ခွင့်ပြုကစားသမားများအတွက်လေ့ကျင့်ရန်အခြေအနေ။ ဖြတ်သန်းပြီးနောက်အစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်၊အသုံးပြုသူရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသင့်လျော်ဆုံးအရေးယူ၊အစီအစဉ်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် အကဲဖြတ်၏အဖြေများ၊ဆုံးဖြတ်ရာတွင်မည်သို့ကောင်းစွာကကစားသမားပဲ့အောင်အတွက်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်၊နှင့်အခွင့်အလမ်းအောင်အမြတ်အစွန်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကျော်အကွာအဝေး။ ဤလျှောက်လွှာကိုစဉ်းစားသည်အအောင်မြင်ဆုံးတဦး။ ဒီကစားသမားကိုရှာအဖြေမှတင်သွင်းသောမေးခွန်းများလွတ်လပ်စွာကတည်းကသူတို့က၊မဟုတ်ပါအတွက်ပေးအပ်စမ်းသပ်ပုံစံ။ အခါအောင်ရင်၊ဒါကြောင့်အကောင့်သို့သာမှန်ကန်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်၊ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ပမာဏအသုံးပြုနိုင်ရန်အဆင့်ဖြည့်စွက်။ သင်တန်းအစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နိုင်ပါတယ်မသာတက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်ကိုင် '၊ဒါပေမယ့်လည်းအ ။ ထို့အပြင်၊သင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်နှင့်အတူအွန်လိုင်းအခြားအသုံးပြုသူများ။ နောက်ထပ်အသုံးဝင်သောအစီအစဉ်များအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်အတူျဖစ္ေသည် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်။ သင်အသုံးပွုနိုငျအရညွှန်ကြားချက်ကိုအပေါ်မည်သို့အကောင်းဆုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ။ သုံးစွဲဖို့ထောက်ခံချက်၊သင်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်သတင်းအချက်ကသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ကဒ်များ၊နှင့်သင့်အနေအထားမှာစားပွဲ၊နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်အောင်တိုးမြှင်။ သုံးစွဲဖို့အစီအစဉ်အောင်မြင်စွာအမည္: အနည်းဆုံးအခြေခံပညာ၏အသိပညာဗမာ၊ရှိကတည်းကရုရှား။ များစွာသောအခြားအလားတူအဖဲချပ်စီအစဉ်များအတွက်။ ရွေးချယ်တဲ့အခါသူတို့ကိုငါ၏တစျခု၊သင်စဉ်းစားသင့်သောမေးမြန်းသင့်တုံ့ပြန်ရန်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်အသုံးပြုရန်မသင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းရပ်ကွက်မှသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖြစ်၏အန္တရာယ်ရှိနေပါသည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့အရင်အစီအစဉ်နှင့်အတူဗိုင်းရပ်စ်များ။
ဖဲချပ်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဂိမ်း၊သငျသညျအနားယူရန်နှင့်လျောက်ပတ်သောပိုက်ဆံ။ သို့သော်၊ဒီအများသောအားဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်သမျှသာပြီးအောင်တစ်သိုက်။ အရင်ကဆိုရင်များမှာအမြဲမကျေနပ်ဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကြောင့်၊လူတိုင်းအဖို့အဆင်သင့်အန္တရာယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွင်ချွေတာခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်မှုအတွက်အနိုင်ရ။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံပူဇော်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံမရှိရင်၊တစ်ဦးကဆင်းငွေပေးချေမှု။ ငါတို့သည်လည်းမှာကြည့်ရှုအပြစ်၏ဤချဉ်းကပ်မှု၊အဖြေအချို့အရေးကြီးမေးခွန်းများကို၊နှင့်ကြည့်ရှုယူမှာအခန်းပေါင်းရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေကိုပူဇော်ဒါပေမယ့်အထင်ကြီးလက်ဆောင်များထည့်သွင်းဘို့ပိုက်ဆံ၏အကောင့်အရင်ကဆိုရင်များအတွက် ဂိမ်းကစား။ ဒါဟာသိသာတဲ့အြန္လိုင္းထူထောင်ကြသည်မဟုတ်သိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ၊သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကထုတ်လုပ်ဖို့။ သို့သော်၊အဘယ်သူမျှမသိုက်ဖဲချပ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံပူဇော်သောအားဖြင့်အများစုကကလပ်အသင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊အတွက် ၈၈၈ ခန်း၊အပိုဆုကြေးရန်ပုံငွေများချီးမြှင့်ကြသည်အသစ်အသုံးပြုသူများငျြးမှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်ရုံကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်အပေါ်တစ်ဦးပရိုဖိုင်အရာရှိတယ်။ ထိုအခါဂိမ်းကစားလိုအပ်ချက်များကိုေဒါင္းလျှောက်လွှာ၊သိုစနစ်နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါလင့်အီးမေးလ်ထဲမှာလာသောအီးမေးလ်တစ်အပိုဆုတောင်းဆိုရန်။ အဆုံးစွန်သောအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်အများအပြားအရစ်ကျ၊နှင့်၎င်း၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏဖြစ်လိမ့်မည်$၈၈။ အဲဒီ၊$၈၀ အတွက်ရရှိနိုင်အဖြစ်ငွေသားလက်ဆောင်၊နှင့်ကျန်ရှိသောအပေး၏ပုံစံအတွက်ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်များ။ တခါဖဲချပ်ထပ် အရန်ပုံငွေများလက်ခံရရှိ၊သူတို့ကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ဆိုအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကအုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းဆိုဖို့အတည်ပြု၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖြည့်ဆည်း၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုသူရဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့်ကာကွယ်သူအနိုင်ရ။ ဤသည်အားလုံးအကြီး၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြပြီမဟုတ်အဖြေကိုအဓိကမေးခွန်း:အဘယ်ကြောင့်အလုပ်ဆိုဒ်များများအတွက်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံမရှိရင်၊တစ်ဦးကဆင်းငွေပေးချေမှုပေးသွားချစ်ပ်။ တကယ်တော့၊အခန်းဘူးလည်ပတ်မှာအရှုံး။ အပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုဘယ်တော့မှချက်ချင်းရရှိနိုင်သည်ဆုတ်ခွာ၊သူတို့ခံရဖို့လိုအပ် ။ ထို့အပြင်၊ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအချို့အချိန်ကန့်သတ်၈၈၈ ဖဲချပ်–၉၀ ရက်ပေါင်း။ ပင်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ကြီးစွာသောကစားသမား၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်လွှဲပြောင်းရန်အနည်းဆုံးတစ်ဦးကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း၊အံ့တစ်ခုလုံးကိုငွေပမာဏကိုများ၏အကျိုး၊ဆုငှေရန်ပုံငွေကိုမှန်ကန်။ ဤအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလက်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်လုပ်နိုင်ပြန်အနိုင်ရရန်? ထိုအခါတယောက်မျှမရှိလိမ့်မည်တားမြစ်ရ။ ဒါပေမယ့်၊အများဆုံးဖွယ်ရှိရလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ပါဝင်ပတ်သက်ဂိမ်းအတွက်အစားအလည္ေချင်ပါလိမ့်မယ်ငြျဖ တွေကိုဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက်အခန်း။ ဤသည်၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ထိုကဲ့သို့သောတင္ျ–ဆွဲဆောင်ဖို့အသစ်အသုံးပြုသူများနှင့်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်အတွက်အဖွဲ့အစည်း။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်အနိုင်ပြန်အနိုင်ရရန်အပိုဆု၊သူတို့သည်ဆုတ်ခွာနှင့်မျှမကြာကြာအဘို့အဆပ်ဖို့ရှိသည်။ လျှင်ပြန်ပြီးတော့၊အခန်းသည်အရှုံး၊ဒါပေမယ့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကသိသိသာသာတိုးပွါး၎င်း၏ဝင်ငွေ။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊အများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းကစားသက်သေပြဤသည်၌အလေ့အကျင့်။ သို့သော်၊သငျသညျမဖြစ်သင့်ကြောင်းကတော့သင့်စွမ်းရည်ကြောင့်၊ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သင်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သောသူအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီရဲလ်ပြိုင်ပွဲနှင့်ဆုချီးမြှင့်ရေကန်များအများအပြားဒေါ်လာသန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။ ပင်လျှင်၊သင့်အသိပညာ၊ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကံကောင်းဖို့အထောက်အကူ ၁၀၀ အောင်မြင်မှုမှာအတုစားပွဲပေါ်မှာ၊ဒါကြောင့်နေဆဲအယူအနှစ်စုဆောင်းမိလာမှပိုပြီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းအစိုင်အခဲ ။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်အသုံးပြုကြောင်းလက်မှတ်ထိုး-အထိဆုကြေးငွေဖဲချပ်ကစားရန်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံများအတွက်အခမဲ့၊ဖတ္ခ်က္ေကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုအခန်းများ၊အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့လူတွေ့ဆုံ၏တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ချက်များကို။ အဖြစ်မကြာမီသင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း၊တော်သောအခန်းများ၊သင်ထိပ်တက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရန်အခွင့်အလမ်းရဖို့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အလေးအနက်တူစစ်တိုက်။ နှင့်ပြည့်စုံတော်သည်ဤ။ ဒီနေရာတွင်ရယူနိုင်ပြီး လက်ဆောင်တစ်ခုအဘို့အပထမဦးဆုံးသိုက်ပြီး၊တစ်ဦးမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ ၁၀၀၀ ရူ။ သို့သော်၊ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းမပုံမှန်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ၊ဒါကြောင့်စစ်ဆေး၎င်း၏ဆီလျော်မှုအပေါ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ရာထူးအပိုင်း။ အဖြစ်အများအကျိုးအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေများကိုသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုမှ၊ဒါကြောင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အများကြီး ၄၀ ထောင်ရူ! ထိုကဲ့သို့သောအထင်ကြီးဆုအဖြစ်ပေး၏အစိတ်အပိုင်းမြှင့်တင်ရေးအရင်ကဆိုရင်များအတွက်။ ဒါဟာသင်ရခွင့်ပြုထားသောအတက်တယ် ၁၅၀ အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးအဘို့အပိုဆု။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ထိပ်တက်သင့်ရဲ့အကောင့်နှင့်အတူ ၂ ထောင်ရူ၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အခြား ၃၀၀၀ ရူလက်ဆောင်အဖြစ်။ ထိုအခါအႀကိဳအကျိုးကိုခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် နိုင်မှဆုတ်ခွာ။ ဖြစ်မည်ဟုကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှား။ ဒီနေရာတွင်အရင်ကဆိုရင်ဝ ၂၀၀ အပိုဆုအပေါ်ပထမဦးဆုံးသိုက်တက်မှ ၂ ထောင်ဒေါ်လာ! ဆုချီးမြှင့်ငွေအသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန်အကောင့်တဖြည်းဖြည်းအားဖြင့် ၁၀ စုစုပေါင်းငွေပမာဏ၊အရာသင်ခွင့်ပြုဖို့ထိထိရောက်ရောက်သူတို့ကိုအနိုင်ရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊လမ်းဖြင့်၊သင်လိုအပ်စုဆောင်းဖို့အပိုဆုအချက်များအၾကည္"တိုက်ပွဲတွေပြန်"များအတွက် ၅၀ အထဲအချက်များ။ များအတွက်အာမခံအကျိုးကို၊ထိုကလပ်ကိုထောက်ပံ့ပေး ၆၀ ရက်ပေါင်းပြီးနောက်၊သောဆုကြေးဇူးကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမှာ။ သိမ်း။ သို့သော်၊အလေ့အကျင့်ကြောင်းသက်သေပြဤကာလအတော်လေးလုံလောက်တဲ့အတွက်တက်ကြွစွာဂိမ်းကစား။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ငါသည်အတူဖော်ပြထားသောအံ့သြဖွယ် ။ ဤသည်ရုရှားကလပ်၊ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာများအတွက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၊ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ နောက်တဖန်အ၊အဘယ်သူမျှမသိုက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်မရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်အခြားအခြေအနေထက်ပိုပြီးအဆင်သင့်။ ဒါကြောင့်၊အစားနိုင်သိုက်ထဲကနေ ၂၅၀ ရူ ၁၂၀ ထောင်ရူသူရဲ့အကောင့်ကိုမှအခန်း၊လက်ခံရရှိတစ်ဆုကြေးငွေများ ၂၀၀ အဘို့မည်သည့်ငွေပမာဏကနေဒီအကွာအဝေး။ ငါသည်လည်းအားရနှစ်သက် အရွယ်ရောက်ရှိသောအထင် ၄၀ ။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုသာတွင်ရုရှားစကားပြောတဲ့အပိုင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအဖြစ်။ သို့သော်၊လျှင်သင်အစပိုင်းတွင်ချင်ကြပါဘူးဖြစ်စေအသိုက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်ချင်သည့်အွန်လိုင်းကာစီနို၊နောက်သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်အတွက်အခန်းအခမဲ့။ သို့သော်၊ကျနော်တို့စကားပြောနေကြသည်သီးသန့်အကြောင်းသွင်ငွေကြေး။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အတွက်ကလိုင်းရ၊ရရှိနိုင်သည့်အရာပေါ်အတိုင်း၊ပြတင်းပေါက်၊အန္း၊သို့မဟုတ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုအားလုံးပလက်ဖောင်း။
ဖဲချပ်လေးဂဏန်း ဒေါင်းလုပ် အခမဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဟက်ကာ ဖဲဘော့ေဖိုရမ် ချစ်ပ် ပစ္စည်းဆိုင် မန်နေဂျာ
© 2021 ဖဲချပ်ကူညီ-ဖဲချပ်အကြံပေးချက်များအက္ပ္ကို